Android ရှိဗိုင်းရပ်စ်များကိုဖယ်ရှားရန်သင်၏မိုဘိုင်းတွင် malware ရှိပါသလား။ | Androidsis
ပါပလော Aparicio | | လုံခွုံရေး, Android cheat, လဲ tutorial
ဘယ်လို Android မှာဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားလိုက်ပါ? Android ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဟာဘာကိုမဆိုလက်တွေ့လုပ်နိုင်တယ်။ ဤလွတ်လပ်ခွင့်ကိုကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တရား ၀ င်မဟုတ်သောစတိုးဆိုင်များမှ application များကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်၊ မည်သည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏မဆိုဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုသုံးနိုင်သည်။ ပိုမိုလွတ်လပ်မှုရရှိရန်အမြစ်သို့မဟုတ်စူပါအသုံးပြုသူလက်လှမ်းမီသည်။ ဒါပေမယ့်ဒီလွတ်လပ်မှုကကျွန်တော်တို့ကိုပြသနာများဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်တရားမဝင်သောစတိုးတစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များကိုဆာဗာသို့ပို့ခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်ကြော်ငြာခြင်း၊ ဗိုင်းရပ်စ် (သို့) Adware ဟုလူသိများသည့် malware အမျိုးအစားများကိုပေးပို့ခြင်းကဲ့သို့သောပြသနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒီတော့လုံခြုံအောင်ကစားဖို့ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
ဤဆောင်းပါးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏သံသယများအားလုံးကိုဖြေရှင်းရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း၊ မည်သည့်ဗိုင်းရပ်စ်မျှကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မသက်ရောက်စေရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကူးစက်ခံရပြီးပါက၊ သို့မဟုတ် Trojan နှင့်ဗိုင်းရပ်စ်များအကြားခြားနားချက်ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားဗိုင်းရပ်စ်များမသက်ရောက်စေရန်လုပ်ဆောင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းစသည်တို့ကိုကြိုးစားဖြေရှင်းပါမည်။ ၎င်းကိုခေါ်ရန်မှန်ကန်သောနည်းလမ်းမှာ malware ဖြစ်သည်။ အချို့ကိုသင်ပင်ထည့်နိုင်သည် Android အတွက်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ antivirus။ သူကပြောပါတယ်, ဤဆောင်းပါး၌ငါတို့သည်သင်တို့ကိုသွန်သင်ပါလိမ့်မယ် Android မှာဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို၎င်းသည် malware ဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သဘောတူထားသော်လည်း
1 Android ရှိ Trojan များနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်များမည်သို့ကွာခြားသနည်း။
4 Android မှာ Trojans ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
4.1 device ကို reset
5 Android မှာဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
6 ဗိုင်းရပ်စ်များကို Android ထဲမဝင်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ
7 Android အတွက်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးအသုံးဝင်ပါသလား။
Android ရှိ Trojan များနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်များမည်သို့ကွာခြားသနည်း။
Trojans နှင့် virus နှစ်မျိုးလုံးသည် malware များဖြစ်သည်။ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရလျှင် malware သည်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖန်တီးထားသော software ဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤဆော့ဖ်ဝဲအမျိုးအစားတွင်များစွာသောကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများရှိသည်။
Un Trojan ၎င်းသည်ကျော်ကြားသော Trojan horse မှ၎င်း၏အမည်ကိုရရှိသည်။ Trojan horse ကိုမြို့တံခါးဝများတွင်ရန်သူများကထားခဲ့သည့်လက်ဆောင်ဟုယူဆရသည်။ Trojans များသည်မဆိုင်းမတွဘဲမြို့ထဲသို့ယူဆောင်လာပြီးဂရိရှိရန်သူများစွာ၏အသတ်ခံခဲ့ရသည်။ Trojan virus သည်အလားတူလုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား၎င်းကိုကောင်းမွန်သောအရာဟုထင်စေခြင်းဖြင့်လှည့်စားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းသည်၎င်းကိုလုပ်ဆောင်သည်။ တနည်းအားဖြင့်သူတို့ကငါတို့ကိုတစ်နည်းနည်းနဲ့သူတို့ကိုယုံကြည်ကိုးစားဖို့လိုတယ်၊ ဒါမှငါတို့ကိုကူးစက်ပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်။
Un ဗိုင်းရပ်စ် ၎င်းသည်ကူးစက်ပျံ့နှံ့။ လွတ်လပ်စွာပျံ့နှံ့စေသောအန္တရာယ်ရှိသော application အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ Android တွင်ရှိသောအရာသည် malware ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ခွင့်ပြုမှသာလျှင်သီးသန့်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုလှည့်စားရန်နှင့်ခွင့်ပြုချက်ပေးရန်ထောက်ပံ့ရန်ကြိုးစားသည့်အန္တရာယ်ရှိသည့်အသုံးချပရိုဂရမ်များဖြစ်သည်။ Android တွင်မည်သည့်ဖိုင်မျှ run ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲပြောင်းလဲခြင်းကိုပြုလုပ်နိူင်မည်မဟုတ်သောကြောင့် Android တွင်ဗိုင်းရပ်စ်မရှိ။
WhatsApp တွင်လိမ်လည်မှုများ (သို့) malware များကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားရမလဲ
ကိရိယာတစ်ခုကိုကောင်းစွာအသုံးပြုခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်သည်။ ထပ်မံ၍ မပြောဘဲကျွန်ုပ်သည် Windows တွင်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးကိုနှစ်ပေါင်းများစွာမသုံးခဲ့ပါ၊ မကြာသေးမီအချိန်အထိ Microsoft စနစ်သည်ဗိုင်းရပ်စ်များအသွင်ရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိကြပါသည်။ Android မှာ၊ အခြားမည်သည့်မိုဘိုင်း (သို့) desktop လည်ပတ်မှုစနစ်လိုမဆို၊ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကိရိယာမှာကူးစက်ခံနေရတယ်ဆိုတာသတိပေးတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ထဲဝင်ဖို့လွယ်ကူတယ်။ ဒါကလိမ်ညာမှုပဲ။ ဤ ၀ င်းဒိုးများ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ link တစ်ခုကိုရိုက်ထည့်ရန်ဖြစ်သည် ဆော့ဝဲဒေါင်းလုပ်ဆွဲရအောင် အားလုံးဖြစ်နိုင်ခြေအတွက်ပေးဆောင်လိမ့်မည်။ ဒီပြတင်းပေါက်အမျိုးအစားကိုတွေ့ရင်ငါတို့ဆုတစ်ခုချီးမြှင့်ခံရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့နိုင်တယ်၊ ငါတို့လုပ်ရမှာကသူတို့ဖြတ်သွားတာပဲ။ နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ Clone များကိုရှောင်ရှားရန်ဖြစ်သည်၊ Samsung S6 ပွား သူတို့ကသင့်ရဲ့ဒေတာကိုစုဆောင်းတဲ့ software ကိုအတူလာ၏။
ကျွန်ုပ်တို့ကိုသွားလာရန်ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်သောစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အခြား ၀ င်းဒိုးအမျိုးအစားများလည်းရှိသည်။ ဤ ၀ င်းဒိုးများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးကူးစက်သည်ဟုယုံကြည်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘရောက်ဇာကိုပိတ်ဆို့မည့် pop-ups များဖြင့်ထိုးနှက်လိမ့်မည် ransomware (ကျော်ကြားသောရဲဗိုင်းရပ်စ်ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ကိုအပိုင်စီးသည်) ပေါ်လာမည့်ပြတင်းပေါက်များထဲမှတစ်ခုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ရန်ပြောလိမ့်မည်။ မလုပ်ပါနဲ့! ကျွန်ုပ်တို့အဲဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသူတို့ကျိန်ဆဲပြီးတဲ့နောက် browser setting ကိုသွားပြီးသမိုင်းကိုဖျက်ပစ်ပါ။
ဒီအစွန်အဖျားဟာအရင်ပုံနဲ့တူသလိုမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘူး။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းတရားမဝင်စတိုးဆိုင်များမှ application များကို Android တွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့တကယ်အန္တရာယ်ရှိချင်သလား။ ဖုန်းချိန်ညှိချက်များတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်စစ်ဆေးပြီးရွေးစရာရှိသည် မသိသောရင်းမြစ်များမှ application များ၏တပ်ဆင်မှုကိုတားဆီးပါသည်။ အဲဒါကိုလိုပဲထားခဲ့တာအကောင်းဆုံး။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်နည်းပညာများစွာကိုမထိန်းချုပ်သောသူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိပြီး၎င်းကိုသေချာစေလိုပါက၎င်းတို့သည်ထိုအသုံးချပရိုဂရမ်ရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်သည်။ သို့မှသာ၎င်းတို့သည်အက်ပလီကေးရှင်းများပြင်ပမှအပလီကေးရှင်းများကိုတပ်ဆင်။ မရပါ။
အက်ပ်များကိုစစ်ဆေးရန်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုလည်းရှိသေးသည် အက်ပ်များကိုမထည့်သွင်းမီခွင့်ပြုပါသို့မဟုတ်သတိပေးပါ ဒါကစက်ကိုပျက်စီးစေနိုင်တယ်။ ဤရွေးချယ်မှုနှစ်ခုကိုစစ်ဆေးသင့်သည်၊ ၎င်းသည်သာမာန်အသိနှင့်အတူတကွအသုံးချဆော့ဝဲလ်၏သက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း၎င်းသည်ကျိုးနပ်ပါသည် ခွင့်ပြုချက်အားလုံးကိုဖတ်ပါ install လုပ်သည့်အချိန်တွင် application ကကျွန်ုပ်တို့အားမေးလိမ့်မည်။ လက်နှိပ်ဓာတ်မီးပလီကေးရှင်းကကျွန်ုပ်တို့၏အဆက်အသွယ်များကိုတောင်းယူရန်တောင်းဆိုပါကဂရုပြုပါ။
Android မှာ Trojans ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
သို့သော်ဤဆောင်းပါးကိုသင်ဖတ်ရှုလျှင်အထက်ဖော်ပြပါအချက်များ (သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးသင်ယခုခံစားနေရသောပြforနာအတွက်) ကိုအသုံးချရန်နောက်ကျဖွယ်ရှိသည်။ ဒီဆောင်းပါးရဲ့အဆုံးမှာဖြေရှင်းချက်ကိုဆက်မလုပ်ခင်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားကြမည် ကိုယ်တိုင် Trojan ကိုဖယ်ရှားပါ။ ဒီအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါတို့ကိုလုပ်ဆောင်ပါမည်။
ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာကစက်ကိုစတင်ပါ ဘေးကင်းလုံခြုံ mode။ Safe mode သည် third-party application များကိုအသုံးမပြုနိုင်သဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ကိုစိတ်ဆင်းရဲစေသည့် malware သည်လည်းမဖြစ်နိူင်ပါ။ ကိရိယာကိုလုံခြုံစိတ်ချရသောနေရာ၌ထားရန်၊ ကိရိယာအများစုတွင်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ပိတ်ထားသောခလုတ်ကိုတစ်စက္ကန့်တွင်နှိပ်ပါလိမ့်မည်။
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်သို့ပြန်သွားကြသည် တစ်စက္ကန့်ကိုနှိပ်ပါ ပြီးတော့လုံခြုံစိတ်ချရသောစနစ်ဖြင့်စတင်ရန်ရွေးစရာကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်၏စက်ပစ္စည်းသည်ဤရွေးချယ်မှုအားဤနည်းဖြင့်မကမ်းလှမ်းပါက၎င်းသည်သင်၏တိကျတဲ့စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်လုံခြုံသောစနစ်ဖြင့်မည်သို့စတင်သည်ကိုရှာဖွေရန်အင်တာနက်ရှာဖွေမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရမည်။
ကျနော်တို့ Start ကိုလုံခြုံ mode မှာထိပုတ်ပါ။
ပြီးတာနဲ့စတင်ကျနော်တို့သွားကြဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ် ချိန်ညှိချက်များ / အပလီကေးရှင်းများ နှင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲ applications များအပိုင်းကိုဝင်ရောက်ပါ။
ဒီစာရင်းထဲမှာငါတို့ကရှာရလိမ့်မယ် ထူးဆန်းတဲ့နာမည်ဖြင့် app ကို သို့မဟုတ်ပါကမတပ်ဆင်သင့်ပါ။ ဥပမာ Angry Birds ဂိမ်းကိုကျွန်တော်တစ်ခါမှမတပ်ဆင်ထားပါကသို့မဟုတ် xjdhilsitughls နှင့်ဆင်တူသော application တစ်ခုရှိပါက
ကျနော်တို့သံသယဖြစ်ဖွယ် application ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
နောက်ဆုံးပေါ် application များမည်သည့်အရာကိုတပ်ဆင်ထားသည်ကိုကြည့်ခြင်းကကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထူးဆန်းသောအရာတစ်ခုကိုတွေ့ပါကကျွန်ုပ်တို့ဖျက်ပစ်သည်။
နောက် application applications menu ကိုသွားပြီးသွားပါမယ် ချိန်ညှိချက်များ / လုံခြုံရေး / ကိရိယာမန်နေဂျာ ကိရိယာပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဤအပိုင်းတွင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဆင့်ရှိသည့်အသုံးချပရိုဂရမ်များကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖယ်ထုတ်ရန်ခွင့်မပြုသည့်လျှောက်လွှာ၏ box ကိုနှိပ်ပါနောက်မျက်နှာပြင်ရှိ "Deactivate" ကိုနှိပ်ပါ။ ယခုသင်သည် app menu ကိုပြန်သွားပြီးဖျက်ပစ်နိုင်သည်။
ပြီးရင်ဖုန်းကို restart လုပ်ပါ။
device ကို reset
ယခုအချိန်တွင်အန္တရာယ်ရှိသော application များသည်လျှို့ဝှက်ချက်မဟုတ်သော software ဖြစ်သည်ကိုသတိပြုပါ။ များသောအားဖြင့်ဗိုင်းရပ်စ်ကို“ အကြမ်းဖျင်း” ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအဆက်အသွယ်များ၊ ပြက္ခဒိန်များ၊ ဓာတ်ပုံများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အရေးကြီးသောအချက်အလက်များကိုအရန်ကူးခြင်းဖြင့်ဆိုလိုသည်။ မိတ္တူကူးယူခြင်းမရှိဘဲ device ကို restore အရေးကြီးသောဒေတာထက်ကျော်လွန်။
Android ကို Linux ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ Linux သည် Unix ကိုအခြေခံသည်။ Unix မိသားစုလည်ပတ်မှုစနစ်များသည်ဗိုင်းရပ်စ်များကိုမဖတ်နိုင်ပါ၊ သို့မဟုတ်၎င်းသည်မဖြစ်နိုင်ပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android စက်သည်ဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးကူးစက်မိပါက၎င်းအားဖယ်ရှားခြင်းသည် Trojan တစ်ခု၏ဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့်မတူသင့်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုရန်လိုသည့်နေရာသည်ဗိုင်းရပ်စ်သည် Trojan များထက်ပိုမိုလွယ်ကူစွာပျံ့နှံ့နိုင်သောကြောင့်၎င်းကိုကိုယ်တိုင်ဖယ်ရှားရန်ယခုအချိန်တွင်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ပြောလိမ့်မည်။ ငါဖမ်းမိရန်ခက်ခဲကြောင်းထပ်ခါတလဲလဲသော်လည်း, ဗိုင်းရပ်စ်သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လျှောက်လွှာထဲကထွက်လာနှင့်အခြားဖိုလ်ဒါကူးစက်နိုင်, ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးအရာဖြစ်နိုင်ပါတယ် device ကို restore.
ဗိုင်းရပ်စ်များကို Android ထဲမဝင်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ
ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြည့်အဝကာကွယ်လိုလျှင်အထူးသဖြင့် malware နှင့်ပတ်သက်သောပြproblemနာမှထွက်ပေါ်လာပြီဟုစဉ်းစားပါက၊ antivirus ကောင်းတယ်။ ဂူဂဲလ်ပလေးတွင်များစွာသောအရာရှိသည်၊ သို့သော်သင့်တော်သောအရာတစ်ခုကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်သင်ဂရုပြုရပေမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရှာနိုင်သော application များစွာသည်ကောင်းမွန်သောကာကွယ်မှုကိုပေးနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘာမျှမဖြစ်နိူင်သောအမှားများကျူးလွန်မိနိုင်သည့်အေးဆေးတည်ငြိမ်သည့်ကိရိယာကိုသုံးနိုင်သည်။
စိတ်ချရရန်၊ ဂူဂဲလ်အပလီကေးရှင်းစတိုးတွင်သင်ရှာတွေ့နိုင်သည့်အကောင်းဆုံးဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးသုံးခုကိုဤနေရာတွင်တွေ့ရှိရသည်။ ဤအပလီကေးရှင်းများ၏ကောင်းမွန်သောအချက်မှာ၊ ထိုကဲ့သို့သောအရေးကြီးသည့်ကုမ္ပဏီများမှလျှောက်လွှာများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောစိတ်ငြိမ်သက်မှုအပြင်၎င်းသည်လည်းဖြစ်သည် သူတို့လုံးဝလွတ်တယ်.
Avast Antivirus 2021 - Android လုံခြုံရေး | အခမဲ့
ရေးသားသူ: avast Software များ
ရေးသားသူ: မိုဘိုင်းလုံခြုံရေး Lookout
Safe Security - ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး၊ Booster၊ ဖုန်းသန့်ရှင်းရေး
ဒါကဒေါ်လာသန်းချီတဲ့မေးခွန်းပဲ။ ကျွမ်းကျင်သူအသုံးပြုသူမဖြစ်မှီက၎င်းသည်မထိုက်တန်ဟုငါပြောလိမ့်မည်။ နောက်ကွယ်တွင်အလုပ်လုပ်သောဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးကိရိယာသည်စက်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသာနိမ့်ကျစေပြီးကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိပါကမထိုက်တန်ပါ။ သို့သော်၎င်းသည်သူတို့ဘာလုပ်သည်ကိုသိပ်မသိသောသူများအတွက်ကောင်းသောအကြံဖြစ်သည် ကိုယ့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအဖြစ်ဥပမာအားဖြင့်၊ ဥပမာသင်သည်အန္တရာယ်ရှိသော application တစ်ခုကိုတပ်ဆင်ရန်ကြိုးစားသည်။ ဤကိစ္စတွင်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဝဲလ်ကိုထည့်သွင်းတပ်ဆင်ခြင်းမပြုလုပ်ရန်သတိပေးလိမ့်မည်။
Android အတွက်အကောင်းဆုံး antivirus
Android တွင် malware သည်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည်ပုံမှန်အားဖြင့်လိုအပ်သည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အင်တာနက်ပေါ်မှာတွေ့သမျှအရာအားလုံးကိုမယုံဘဲခေါင်းထဲရှိရမယ်။ လုံခြုံရေးကိုပိတ်ထားဖို့မလိုပါဘူး ကိရိယာများကိုပုံမှန်အားဖြင့်ယူဆောင်လာသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အမှားလုပ်ပြီးပြီဆိုလျှင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်မှာ
safe mode ထဲကိုဝင်ပြီး virus ကိုကိုယ်တိုင်ဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားကြပါစို့။
သင်ဟာ Android မှာအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဆော့ဝဲလ်များရဲ့သားကောင်ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါသလား။ မှတ်ချက်များတွင်သင်၏အတွေ့အကြုံကိုချန်လှပ်။ သင်လိုက်နာသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုပြောပြရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့် Android မှာဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားလိုက်ပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » လုံခွုံရေး » Android မှာဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
177 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
လွန်ခဲ့တဲ့6အနှစ်
ဒေတာအတွက်အဆင်ပြေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၌အလွန်မြန်မြန်၊ ထိရောက်ပြီးဘက်စုံသုံးဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး antivirus တစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည် PSafe ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည် Cloud မှအရာအားလုံးကိုရပ်တန့်စေသောပြproblemsနာများမရှိဘဲလုပ်ခြင်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ယောက်ျားတွေစမ်းကြည့်ရအောင်
ကီဗင် Daniel Sosa ဟုသူကပြောသည်
လွန်ခဲ့တဲ့2အနှစ်
ဗိုင်းရပ်စ်သည် "Qysly.AJ" ကိုမည်သို့ဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့သနည်း။ ကျေးဇူးပြု၍ android table မှကူညီပါ။
Kevin Daniel Sosa အားပြန်လည်ပြောဆိုပါ
လွန်ခဲ့တဲ့ 1 တစ်နှစ်
Android / anydown / U
သူတို့ကသူက malware လို့ပြောပြီးအဲဒါကိုငါဖယ်ရှားသင့်တယ်၊ အဲဒါမှန်မမှန်ဆိုတာကိုငါမသိဘူး။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ဗိုင်းရပ်စ်များသည်စက်ရုံမှထုတ်လုပ်သောစုစုပေါင်းဗိုင်းရပ်စ်အက်ပ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပြီးသင်အမှန်တကယ်ဗိုင်းရပ်စ်များကိုသင်တွေ့နိုင်ပြီးအများစုမှာ Trojans များဖြစ်သည်။
တစ်စုံတစ် ဦး က၎င်းတို့သည်မှားယွင်းသောလက္ခဏာများသို့မဟုတ်စနစ်ကာကွယ်မှုဖြစ်သည်ဟုပြောနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုအမှတ်တံဆိပ်၏မိုဘိုင်းလ် ၂ လုံးဖြင့်အတည်ပြုနိုင်သည်။ တူညီသောမူကွဲကမှားယွင်းသောလက္ခဏာများကိုသူတို့ယုံကြည်ပါကထပ်ခါတလဲလဲပြောဆိုရမည်။
ဒန်နီ borrelli ဟုသူကပြောသည်
HELLO !! အရာအားလုံးသည် Chantada တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါ VHUHOHOTHRO၊ ကျွန်ုပ်သည်လုံးလုံးလျားလျား PSAFE ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် MALICIOUS MALWARE ၏တည်ရှိမှုအားလုံး၊ ကျွန်ုပ်သည် TROJANS နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်ုပ်ကိုသတိမထားမိခဲ့ပါ၊ မည်သည့်အရာမှပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ သူတို့ကိုသင်နှင့်အခြားအရာများကိုပေးမလား?, Android သည်မည်သည့်ဗိုင်းရပ်စ်များမပါ ၀ င်ပါ၊ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း APP တွင်သို့မဟုတ်ကြော်ငြာတွင်ကျွန်ုပ်၏သားကမည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေသည်ကိုဂျော်ဒန်လူမျိုးများအတွက်စစ်ဆေးသည်။ ကျွန်ုပ်သည်နောက်ထပ်တီထွင်သောပစ္စည်းများ၊ ကျွန်ုပ်သည်နောက်ထပ်အထောက်အထားများ၊ !! ဖက်သည်!
Danny Borrelli ကိုပြန်သွားပါ
ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုမသိပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် google play မှအက်ပလီကေးရှင်းများစွာကိုဒေါင်းလုပ်ချပြီးပါပြီ ငါစုစုပေါင်းဗိုင်းရပ်စ်အက်ပလီကေးရှင်းကိုလည်းကူးယူပြီးကူးစက်ခံရပြီးမသိသောအက်ပလီကေးရှင်းများစွာကိုလည်းတွေ့မြင်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်ဗိုင်းရပ်စ် ၈၀ ကျော်ကိုပြသည်။ သူတို့သည်မဖယ်ရှားနိုင်ပါ။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး
Manuel Ramirez ဟုသူကပြောသည်
ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာ Miguel ၏ဖုန်းသည်သင့်အတွက်ဘာမျှအလုပ်မလုပ်ပါကသင်မြင်ပါကပြန်လည်စတင်ရန်ဖြစ်သည်။
cari monsor ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းဖုန်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်များကြောင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်သည်၊ ဆဲလ်များကိုသတ်မှတ်ပေးပြီး၊ ထပ်မံ၍ တက်ကြွလာသည်ကိုဖယ်ထုတ်ပြီးလျှင်ပင်၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်အားသူတို့၏ဗဟုသုတနှင့်ကူညီနိုင်ပါသလား။
cari Monsor အားပြန်ပြောပါ
သင်၏ဖုန်းကို flash လုပ်ရန် YouTube မှသင်ခန်းစာရှာဖွေပါ။ Flash "Flash XXXX" မော်ဒယ်သည်ဖုန်း၏နောက်ဘက်တွင်သင်ဘက်ထရီကိုဖယ်လိုက်ရုံသာဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီ၊ ခေါင်းကိုဗိုင်းရပ်စ်တွေနဲ့မကာကွယ်မိစေဖို့ပြitsနာကိုအမြစ်တွယ်နေအောင်လုပ်ထားတာပိုကောင်းတယ်။
ဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ရမည်၊ ၎င်းကိုသင်၏ဖုန်းမော်ဒယ်သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာ application မှရှာဖွေပါ။ သင့်ဖုန်းရှိပါကအောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းသင် root လုပ်ပြီး rom ထည့်သွင်းရန်မလိုပါ။ ဗိုင်းရပ်စ်များသည် z-files root ကိုကူးစက်ပြီး ၄ င်းတို့ကိုဖယ်ရှား။ မရနိုင်ပါ။
ဟယ်လိုသူငယ်ချင်းများတွင် DOWWALL ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်လုံခြုံမှု ၀ န်ဆောင်မှုတွင်စွမ်းအားပြည့် MALWARE နှစ်ခုရှိသည်။ အခြားမည်သည့်အရာကိုမဆိုကျွန်တော်ပိတ်ထားလိုက်သည်၊ ဖုန်းကိုအမြန်ပြန်ပို့ပြီးမည်သည့်အမြန်လျှောက်လွှာနှင့်မျှထိုအရာကိုမရရှိနိုင်ပါ။ ငါ့ကိုကိုးကားပါစေကျေးဇူးပြုပြီးငါ့ကိုပွေ့ဖက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ayala အစဉ်အဆက် ဟုသူကပြောသည်
monkeytest မှာဗိုင်းရပ်စ်အချို့ရှိသည်ဟုငါဆိုသည်။ Timeservice ။
အစဉ်အဆက် aldo ayala မှစာပြန်ရန်
Juan Carlos Castillo နေရာချထားပုံ ဟုသူကပြောသည်
ငါသုတေသနလုပ်နေတယ်၊ ​​အက်ပလီကေးရှင်းတွေနဲ့ငွေတွေကိုဖယ်ရှားဖို့သင်ခန်းစာတွေအများကြီးလုပ်ပြီးပြီ။ ငါမှာ bmobile ဖုန်းရှိတယ်၊ ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပရိုဂရမ်တွေ၊ ဗိုင်းရပ်စ်တွေပါတဲ့တရုတ်ဖုန်းတွေရှိတယ်၊ သူတို့ပြောသလိုလွယ်လွယ်ကူကူဖျက်လို့ရတယ်၊ ငါမှာလည်းမျောက်စာလည်းရှိတယ်။ Timeservice နှင့်ကျွန်တော်မဖျက်နိုင်သည့်နောက်ထပ် ၄ ခုနှင့် ၄ င်းတို့သည်ဗိုင်းရပ်စ်များသယ်ဆောင်သောတစ်ခုတည်းသောဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အား disable လုပ်ရန်မှာပြproblemsနာများစွာမဖြစ်ပေါ်စေခြင်းနှင့်၎င်းတို့ကို rom ထဲတွင်ပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်းကြောင့်ပြန်လည်စတင်ခြင်းအလုပ်မလုပ်ပါ။ ဖုန်းများနှင့်အရာအားလုံးကို reboot ဖြင့်ဖြေရှင်းပြီးပြီဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်တရုတ်ဖုန်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ် ၀ ယ်သည့် sony သည်အာမခံချက်အောက်တွင်ရှိသောကြောင့်သာ
Juan Carlos Castillo ကိုပြန်ပြောပါ
ငါ့မှာ nokia..adable ဖြစ်လို့ယခုလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်က andrtoid နဲ့အတူ Samsung ဟာငါသည်းမခံနိုင်တော့ဘူး။
ကျွန်ုပ်အားအလွန်နှေးကွေးသော Samsung Galaxy galaxy ကျော်ကြားမှုကိုကူညီပါ။ ၎င်းကိုသော့ခတ်သောအခါ၎င်းသည်သော့ခတ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်မည်သည့်အရာမျှမပြုလုပ်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တွင် virus timeservice နှင့် monkestest ရှိခဲ့သည့်အတွက်ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုတွင် monkeytest ကိုဖျက်ပစ်နိုင်သည်။ ငါ operating system မှာငါကပြောင်းလဲပစ်လျှင်ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားပစ်လျှင်, တ ဦး တည်းဆက်လက်? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
carlos B ကိုပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်၏ Xperia M တွင်ဗိုင်းရပ်စ်များကိုကျွန်ုပ်မဖယ်ရှားနိုင်ပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်လုံခြုံစိတ်ချရသောစနစ်ဖြင့်စတင်ပါက၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်ဖျက်လိုက်သည်နှင့်အလုပ်လုပ်နေပါသေးသည်။
ကျွန်ုပ်၏Síragon 4n တက်ဘလက်မှ engriks၊ mobile ocker နှင့်ဗိုင်းရပ်စ်ကိုအဆင့်ဆင့်မဖယ်ရှားနိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်လုပ်ခဲ့သောအရာသည်ကျွန်ုပ်၏စက်ရုံ၏အချက်အလက်များသို့ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ လှည့်ကွက်သည်ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းမပြုမီ၊ အသုံးချပရိုဂရမ်များကို disable လုပ်ခြင်း၊ ကိရိယာ၊ သင်ရှိသည့် application များသို့ ၀ င်ရောက်မှုကို (အလွန်အရေးကြီးသည်) ဖွင့်သောအခါဗိုင်းရပ်စ်ကိုအမြန်ဆုံးဖယ်ရှားပါ၊ အပြေးပလီကေးရှင်းများကိုစစ်ဆေးပါ၊ သူတို့ပိတ်ထားသလား၊ စစ်ဆေးပါ၊ ချက်ချင်းလက်ငင်းဖွင့်လိုက်သောအခါ application များကိုဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားပါ။ ထပ်မံ၍ သိသာထင်ရှားသည့်ဗိုင်းရပ်စ်သည်သင်စက်ကိုဖွင့်တိုင်းပေါ်လာလိမ့်မည်၊ သို့သော် application များကိုချက်ချင်းလက်ငင်းရယူခြင်းနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်ကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်၎င်းစက်သည်ပြသနာမရှိဘဲလည်ပတ်နေပြီး၎င်းကိုသင်ဖွင့်တိုင်းသတိပြုပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ဒေးဗစ်၊ ကျွန်ုပ်၏ blu ဖုန်းတွင်ဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးတည်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တွင်ဗိုင်းရပ်စ်ပါဝင်သည့်အသုံးချပရိုဂရမ်များအားလုံးရှိပြီး၎င်းတို့ကိုဖယ်ရှား။ မရပါ။ ကျွန်ုပ်မှာပျောက်ဆုံးခြင်းရှိမရှိကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ အကြောင်းမှာမိုဘိုင်းဒေတာကိုအင်တာနက်အသုံးပြုရန်အခါတိုင်းအိမ်မျက်နှာပြင်တွင်ကြော်ငြာစတင်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Manuel Ramirez
အရမ်းကောင်းတဲ့ antivirus 360energy ငါ mr porn နဲ့ပြtheနာကိုဖြေရှင်းတယ်
ငါအကောင်းဆုံးထောက်ခံချက်ပေးခဲ့တယ်၊ ငါကငါ့အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်၊ ဗိုင်းရပ်စ်ကို engriks လို့ခေါ်တယ်။ ငါရူးနေပြီ။
ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒီလမ်းညွှန်ကသင့်ဖုန်းကိုသန့်ရှင်းအောင် ၀ မ်းသာပါတယ်။ : =)
သငျသညျ gersy ပေးသောထောက်ခံချက်ကိုငါမမြင်ရ။
ငါနဲ့တခြားသူတွေလည်းအတူတူပဲပြproblemနာရှိတယ်။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုကဆေးကြောဖို့လမ်းညွှန်ပေးနိုင်သည်။ ငါတန်ဖိုးထားတယ်
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါလား ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်မှာ ၅ ထရိုဂျန်ရှိပြီး Fabrika ရဲ့ဒေတာကိုပြန်ယူပါ။ ပြန်စပါမယ်။
စာမျက်နှာများတွင်ကျွန်ုပ်၏ဘက်ထရီသည်ဗိုင်းရပ်စ် (၄) ခုတိုက်ခိုက်နေခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းသည် (၂) ရက်သာရှိသေးသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ထူးဆန်းသည့်အရာတစ်ခုကိုမတပ်ဆင်သေးပါ။ ကျွန်ုပ်၏ xperia ကိုအဆင့်မြှင့်ရန်ပြောပါသည်။ back နှင့်အနက်ကိုလက်ခံသည်ဟုဆိုသောအနက်ရောင်သင်္ကေတဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ငါ browser ကိုပိတ်ရန်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်လား၊ ဆဲလ်ဖုန်းများကိုကူးစက်စေလိုသောဆာဗာအချို့လားကျွန်ုပ်မသိပါ။ ကျွန်ုပ်ပုံစံချသင့်သလား။
Jose Rafael ကိုပြန်ပြောပါ
အကယ်၍ ၎င်းသည်ဝဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုပေါ်တွင်ရှိနေပါက၊ အကောင်းဆုံးအကြံပေးလိုသည်မှာ pop-up windows ၏ web browser ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အတွေ့အကြုံမှသင်ခန်းစာယူခြင်း၊ ၀ င်းဒိုးကိုလက်ခံခြင်း၊ Browser ၀ င်းဒိုးပေါ်လာလိမ့်မယ်၊ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်တကယ်လို့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်လျှင် FLEE ။
Pd - ဗိုင်းရပ်စ်မဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့သူတို့တပ်ဆင်စေချင်တဲ့ပရိုဂရမ်က ၉၉.၉၉၉၉၉% ရှိတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်နိုင်တယ်။
ကျွန်တော့်မှာ Sony e1 ရှိတုန်းကတခါမှမကြုံဖူးဘူး၊ တစ်ခါတလေအင်တာနက်ကို ၀ င်တာ၊ ဆဲလ်ဖုန်းမှာဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးတပ်ဆင်ထားတာကြောင့်ငါဆဲလ်ဖုန်းမှာဗိုင်းရပ်စ်ရှိနေတယ်လို့စာမျက်နှာတစ်ခုထွက်လာတယ်။ အရာအားလုံးအဆင်ပြေသွားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးအမှားအယွင်းများဟုကျွန်တော်ထင်သည်။ ထို့နောက် download ကို နှိပ်၍ စတိုးဆိုင်ကိုဖွင့်ရန်ပို့ပေးသည်။ 360 လုံခြုံရေးတပ်ဆင်ရန်ပြောလိုက်သည်၊ ၎င်းကိုတပ်ဆင်သည်၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်ကူးစက်ခြင်းမရှိဘဲအတူတူလုပ်သည်။ နောက်စာမျက်နှာတစ်ခုရတယ်။ သူကငါ့ရဲ့ Android ကို update လိမ့်မယ်၊ ဒေါင်းလုပ်ကိုနှိပ်ပြီး play store က application တွေကို install လုပ်မယ်၊ တစ်ခုထပ်သွင်းမယ်။ ဖျက်လိုက်ရင်ဒါကဝါဒဖြန့်တာပဲဆိုတာသဘောပေါက်လိုက်တယ်၊ တူညီတဲ့အရာ၊ ကျွန်ုပ်သည်ယင်းကိုအာရုံမစိုက်တော့ပါ၊ သို့သော်ယခုတွင်၎င်းသည်သမိုင်းကြောင်းတွင်ပြproblemsနာများဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်သဘောပေါက်လာသည်။
ဘုရားသခင်မှ ... သင် (brayan) ၌ရယ်စရာကောင်းသောစာလုံးပေါင်းသည်စာလုံးပေါင်းနှင့်သဒ္ဒါဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုအဆင့်နှင့်အချိုးကျသည်။
Marco Moreno ဟုသူကပြောသည်
Manuel Ramirez \_ t ဗိုင်းရပ်စ်သည်ပုံမှန်မဟုတ်သောကြောင့်ဆဲလ်ဖုန်းအလွန်နှေးနှေးနှေးသည်။ ကျွန်ုပ်သည်စက်ရုံမှပြန်လည်စတင်ခြင်းနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်ဆက်ရှိနေခြင်း၊ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည်မည်သည့် application များရပ်ဆိုင်းသွားကြောင်းနှင့် WeQR ကဲ့သို့သောလက္ခဏာများကိုပြသသည်။ ပြီးပြီ။ ဖယ်ရှားပြီးဖြစ်သည်။ ဤကတ်စတီဒီယိုသည်ရပ်တန့်သွားသည်။ ၎င်းသည်အလွန်နှေးနှေးလွင့်လွင့်နေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ချိန်ညှိချက်များထည့်ရန်ခက်ခဲသော်လည်းလွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ကကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းကိုပြုခဲ့သောအမြစ်ကြောင့်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သောစာပေများကိုကျွန်ုပ်ထည့်နိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြုပြီး Manuel ကကျွန်ုပ်ကိုအရေးတကြီးကူညီပေးပါ။ https://www.facebook.com/marco.a.moreno.3958
Marco Moreno အားပြန်ပြောပါ
Android ဗားရှင်းအသစ်များသို့အသစ်ပြောင်းရန်သင်နည်းလမ်းရှိပါသလား။ မည်သည့် Android ဗားရှင်းကိုသင်အသုံးပြုပါသလဲ။
ကောင်းတယ်၊ ငါ့ကိုရူးသွပ်စေတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တစ်စင်းကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ… .. tuto အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းမှဗိုင်းရပ်စ်ကိုမည်သို့ဖယ်ရှားနိူင်သနည်း၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်စက်ရုံကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အလားတူလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီး၊ ဗိုင်းရပ်စ်သည်ဆက်လက်ရှိနေသော်လည်း၎င်းကိုလျှောက်လွှာတစ်ခုအနေဖြင့်မတွေ့ပါ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနားလည်အောင်လုပ်ပါ၊ ရပ်တန့်ခြင်းသို့မဟုတ်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခြင်းရှိမရှိသိပါစေ၊ ဤဗိုင်းရပ်စ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုနှောင့်ယှက်သည်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ။
Zelden နဲ့ဆင်တူတယ်၊ ငါမှာ bq နဲ့ virus-tabs တွေရှိတယ်၊ X-apps တွေကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ဖို့ပြောတယ်၊ ငါ့ဖုန်းကူးစက်ခံထားရတယ်။ လုံခြုံစိတ်ချရသောစနစ်တွင်အန္တရာယ်ရှိသောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုခုမရရှိပါ၊ ပုံမှန်အက်ပလီကေးရှင်းများ (ပုံမှန် WhatsApp, instagram ... ) ကိုကျွန်ုပ်ရယူပြီးပါပြီ။ ခဏကြာမှပြန်ဖြစ်ပြီးနောက်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရတာလဲ။
သင်စက်ရုံဒေတာပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းကိုလုပ်ဆောင်လျှင်တောင်သင့် BQ တွင်ရှိနေဆဲဗိုင်းရပ်စ်ရှိပါက @kate ဆိုလျှင်ပုံမှန်အားဖြင့်လာသည့်ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့် app ကိုမည်သည့်အက်ပ်ကိုမှမတပ်ဆင်ပါနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်ပွားခြင်းဟုတ်၊ မဟုတ်ကိုကြည့်ပါ။ အကယ်၍ သင်၏ဖုန်းသည် BQ ဖြစ်သည့်တိုင်သင်၏ဖုန်းသည်အာမခံချက်မရှိလျှင်၎င်းကိုသူတို့ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်မလားသိရန်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုကိုဆက်သွယ်ပါ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးဖြစ်လျှင် hardware ထဲ၌ပေါင်းစည်းထားလျှင်သင် reset လုပ်သည့်တိုင်၎င်းသည်ရှင်သန်နေဆဲဖြစ်သည်။
သင်မတတ်နိုင်သည့်အရာမှာလွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကစမတ်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းကိုသင်မသုံးနိူင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ BQ ကိုဆက်သွယ်ပါ။
Nicolas Reyes ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မှာ Bmobile Ax2 နဲ့ ax610 ၂ ခုရှိတယ်၊ apk အချို့သည်အလိုအလျောက် download လုပ်သည်။ pornclub, battery saber, smart touch, pink မိန်းကလေးများဟုခေါ်သည်၊ ထို့နောက်အခြားသူများသည်အလိုအလျောက်ဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ ဖယ်ထုတ်ရန်မဖြစ်နိုင်သည့်စနစ်ကို ကပ်၍ ငါစိတ်ဆိုးမိပြီးဆဲလ်ဖုန်းတွင် root root ခွင့်ပြုခြင်းနှင့်စနစ်အတွင်းရှိအရာများကိုစစ်ဆေးရန်ကျွန်ုပ်စဉ်းစားမိသည်။ ဆဲလ်ဖုန်းအက်ပလီကေးရှင်းများမသိသောဆဲလ်ဖုန်းအက်ပလီကေးရှင်းများက၎င်းကို Root စူးစမ်းလေ့လာခြင်းအားဖြင့်ဖျက်ပစ်သည်။ ထို့နောက် SD maid ဖြင့်၎င်းအက်ပလီကေးရှင်းများ၏အလောင်းများကိုရှာပြီးဖျက်ပစ်သည်။ အဲဒီနောက် Cel ကိုထုတ်လုပ်ဖို့ reset လုပ်တယ်၊ ကွန်ပျူတာကိုသုံးပြီး internal storage ကိုလည်း format လုပ်တယ်။ ကျန်ရှိသော apks ၏ကျန်ရှိသောဖျက်ပစ်ရန်။ ကိစ္စနောက်ထပ်အသိပေးစာသည်အထိအခြေချခဲ့သည်။
Nicolas Reyes အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ သင်ပြုခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်ကြိုးစားပါလိမ့်မည်၊ ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းမှာ bmobile ax512 ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည်လည်းထိုပြproblemနာကိုဆောင်ကြဉ်းပေးပါသည်
ငါ့မှာ lenovo a850 တက်ဘလက်ရှိတယ်၊ ဗိုင်းရပ်စ်များစွာရှိတယ်။ အက်ပလီကေးရှင်းတွေကိုငါပယ်ဖျက်တယ်။ စက်ရုံကသတင်းအချက်အလက်တွေကိုငါပယ်ဖျက်လိုက်တယ်။ လျှောက်ထားချက်တွေရှိနေသေးတယ်။ 360 လုံခြုံရေးဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ငါ့ကိုခွင့်မပြုဘူး၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားဖျက်ရန်ရွေးချယ်စရာမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်၏တက်ဘလက်မှာကပ်နေပြီးပြန်လည်စတင်သည်။ စာမျက်နှာများကိုဖွင့်ပါ။ အကူအညီလိုအပ်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုမသိပါ။
ကောင်းပြီ၊ အဲဒါဟာကျွန်တော့်အတွက်အလုပ်မလုပ်ဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါကတစ်နည်းနည်းဖြင့် uninstall လုပ်ပြီး၎င်းကိုဖွင့်သောအခါပြန်လည်ထည့်သွင်းပြီး android update လုပ်ခြင်းလို့ပြောခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဗိုင်းရပ်စ်ကို engrils ဟုခေါ်သည်
ကောင်းပြီ၊ အဲဒါကို engrils လို့ခေါ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒေါ်လာသန်းမေးတဲ့မေးခွန်းကဒါကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားသလဲ။
ကျွန်ုပ်မည်မျှပင် format လုပ်၍ ပြန်လည်ရယူသည်ဖြစ်စေ၊ system application သည်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဆက်လက်ပေါ်နေပါသည်။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း
Reinier hernandez ဟုသူကပြောသည်
အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်ကိစ္စတွင်မိုဘိုင်းဖုန်းသည်တရုတ်ဖြစ်ပြီးမိန်းကလေးက၎င်းကိုကစားရန်ယူထားသည်၊ သူမသတိမရှိသောကြောင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိမည်သည့်ဝက်ဝံကိုမှမဖွင့်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါဒီစာမျက်နှာကိုမကြာခဏသွားလိမ့်မယ်။
Reinier Hernandez အားစာပြန်ပါ
Daniel Castro ဟုသူကပြောသည်
apk ကိုဆက်ပြီး install လုပ်ပါ။ ဒါဆိုရင် virus ကိုဖွင့်တဲ့ apk ကိုဖွင့်လို့မရပါဘူး
daniel castro အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်တော့် Cel မှာရှိသောဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးပရိုဂရမ်တခုခုကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကကျွန်တော့်ဆီမကြာခဏ Spam တွေပို့တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ပြfindနာကိုမတွေ့ပါဘူး။ antmalwere .e က system / app / မှာတည်ရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ con.android.louncher gw apk ပါ။ ကျွန်ုပ်ရှာပြီး၎င်းကိုရှာမတွေ့ပါ။ ၎င်းသည်အက်ပလီကေးရှင်းကိုမရည်ရွယ်ဘဲခွင့်မပြုပါ။
သူငယ်ချင်းများ၊ ငါ၌ပြaနာတစ်ခုရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်တွင် application အချို့တပ်ဆင်ထားသည်၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ၊ ၎င်းသည် mobileocr, monkeytest နှင့်အခြား serviceervice ခေါ်ဆိုမှုများကိုမကြာခဏပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည်ရပ်တန့်သွားပြီးဖုန်းကိုနှေးကွေးစေပြီးဖယ်ရှားရန်ထို option ကိုမပေးပါ။
Hello Manuel Ramirez၊ ကျွန်ုပ်တွင်ဂယ်လီ s6 ၏ပုံတူတစ်ခုကျွန်ုပ်သည်ဗိုင်းရပ်စ်တစ်ကောင်ကိုဖမ်းမိပြီး၎င်းကိုကျွန်တော်မဖယ်ရှားနိုင်ပါ။ ၎င်းကိုငါဖွင့်သောအခါမည်သို့ပြန်လည်သတ်မှတ်သည်ဖြစ်စေ၎င်းတို့အားထပ်မံဖွင့်ထားသည်၊ သင်ဘာအကြံပြုသနည်း။ ကြိုတင်ပြီးကျေးဇူးပါပဲ။
Factory သို့ပြန်သွားပါ၊ အကယ်၍ ထပ်တူဖြစ်နေပါကဖုန်းနှင့်ပတ်သက်သောဗိုင်းရပ်စ်များရှိမရှိသိရန်ဖုန်းအတွက်အခြား gmail အကောင့်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားပါမည်။ ပြီးတော့ငါ့ကိုပြောပြပါ!
Luis Galviz ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်တွင် blu 4.0advance ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဗိုင်းရပ်စ်အားဖျက်ရန်လူသားအားလုံးအတွက်တတ်နိုင်သမျှလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ပိတ်ထားသည်။ ၎င်းသည် cel ၏အမြစ်ပိုများသောကြောင့်ဖယ်ရှားရန်ပုံရသည်၊ မပျောက်ကွယ်သွားပါ၊ ငါသာ disable နိုင်ပါတယ်
luis galviz သို့ပြန်သွားရန်
ဝီလျံ gonzalez ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မှာဆဲလ်ထဲကဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တွေနဲ့ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူး။ ကံမကောင်းတာကတော့ဂူဂဲလ်ကစားခြင်းဝန်ဆောင်မှုများပေါ်လာပြီးကြောင်စတူဒီယိုကရပ်တန့်သွားပြီးငါ့ကိုဘာမှလုပ်ခွင့်မပြုဘူး။ ၎င်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်များပါ ၀ င်သည့် application များကိုအလိုအလျောက် download ပြုလုပ်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုလည်းမသိတော့ပါ၊ ကျွန်ုပ်ဆဲလ်တွင်ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါ၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ
wilian gonzalez အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်၌ဗိုင်းရပ်စ်ရှိနေပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်ဖယ်ရှား။ ပိတ်လိုက်သောအခါ ခလုတ်သည်မီးခိုးရောင်ဖြစ်သည်။ ကူညီကြပါ
ဗိုင်းရပ်စ်ကိုကျွန်တော်တွေ့ပြီးပါပြီ၊ ၎င်းသည် Trojan ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ဖယ်ရှားနိုင်သောဂိမ်းများကိုသွင်းသည်
ဒါပေမယ့်ဗိုင်းရပ်စ်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မထုတ်နိုင်ဘူး AAAAAAAAUXILIOOO !!
ဒါပေမယ့်ဗိုင်းရပ်စ်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မထုတ်နိုင်ဘူး AAAAAAAAUXILIOOO !! ၎င်းကို google calendar plugin service ဟုခေါ်သည်
hello manuel ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းတွင် Trojan ဗိုင်းရပ်စ်ကိုအမြန်ဆုံးတွေ့ရှိရန်လိုအပ်သည်။ အစတွင်အသုံးမကျသော apk များနှင့်ကြော်ငြာများသာတပ်ဆင်ထားသည်။ အလွန်စိတ်ပျက်စရာကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်အကူအညီရှာရန်ကြိုးစားသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်ဘာမှမကူညီနိုင်ခဲ့၊ ဆဲလ်ဖုန်းသည်လည်းအလွန်နှေးသောကြောင့် အဆိုးဆုံးအမှားက၎င်းကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနှင့်ပြန်ဖွင့်ခြင်းမလုပ်နိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းအတွက်စက်ရုံအမှတ်တံဆိပ် OWN S4025 ပေါ်တွင်သာတွေ့ရပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်ယနေ့ခေတ်တွင်ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းအလွန်ကြီးထွားလာခြင်းနှင့်အတူသင့်ကိုမေးမြန်းပါ။ နေ့! သင့်ကိုကူညီမစခင်သင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကိုယ်ပိုင် 748 လား ဘာကုန်အမှတ်တံဆိပ်ထုတ်လုပ်သူလဲ သင်ခွင့်ပြုပါကပြန်လည်ထူထောင်ရေးထဲသို့ဝင်ရောက်ရန်သော့ကိုပေါင်းစပ်ရန်သင်ရှာရမည်။ ပြီးတော့ငါ့ကိုပြောပြပါ
မည်သူမဆိုယင်းကိုပြုပြင်နိုင်ခဲ့သလား။ ငါကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတာနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူး၊ သင်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုပြီးတာနဲ့ဒုတိယအကြိမ်မှာခိုးထွက်ပြီး pop-ups ထွက်လာပြီး application တွေကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့မိုဘိုင်းကိုထပ်ခါထပ်ခါပြန်ဖွင့်တာတောင်ဒီအစွမ်းထက်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တွေငါမသိဘူး android အတွက်ရှိတယ်၊ သူတို့ကိုစက်ရုံမှာသတ်မှတ်ထားရမယ်၊ ဖယ်ထုတ်ဖို့နည်းလမ်းမရှိဘူး
သင်လုပ်နိုင်တာက Custom ROM အမျိုးအစား CyanogenMod ဒါမှမဟုတ်မိုဘိုင်း ROOT ကိုရှာခြင်းဖြစ်သည်။ ထုံးစံအတိုင်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုသင် install လုပ်ပြီးအဲဒီမှာရှိတဲ့ system files အားလုံးကိုသုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတော့သင်များသောအားဖြင့်သင်အသုံးပြုသောအကောင့် မှလွဲ၍ အခြားဂျီမေးလ်အကောင့်တစ်ခုကိုစမ်းသပ်ရန်ဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါနံနက် အချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်ဖုန်းသည်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိပေါ်လာသည့် ၀ င်းဒိုးများပေါ်လာလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုကျွန်ုပ်ငြီးငွေ့သော application များကိုတပ်ဆင်ရန်ပြောသော်၎င်းကိုကျွန်ုပ်ခံစားမိသည့်အခါ၎င်းကို format လုပ်သည့်အခါ၎င်းကိုကူးယူပြီးလုံခြုံစွာပြန်လည်စတင်ပါ။ ငါအင်တာနက်သို့ရောက်သောအခါ engrils လျှောက်လွှာကသူတို့ကိုယ်သူတို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးဖယ်ထုတ်ပြီးသောအက်ပ်များအားလုံးကိုရပ်တန့်သွားပြီဟုပြောသော်လည်းဘာမျှမရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ၊ ၎င်းကိုမည်သို့ဖျက်ရမည်ကိုပြောပြပါ။
Android ဖုန်းကို Flashtool ဖြင့်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကို Xperia zr မှာကျွန်တော်ဖြေရှင်းခဲ့ပြီးဖုန်းရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်မူတည်ပြီးသူတို့လုပ်နိုင်ပါတယ်။
luis omar ဟုသူကပြောသည်
google play အတွက်ဗိုင်းရပ်စ်နှင့်အတူကျန်ရှိနေသေးသော whatsapp ဖွင့်မထားဘူး
luis omar သို့ပြန်သွားရန်
ဟယ်လို၊ ကျွန်ုပ်၏ Samsung Galaxy A3 မိုဘိုင်းဖုန်းတွင်ပြproblemနာရှိနေသည်။ ကျွန်ုပ်အားမိုဘိုင်းအသုံးမပြုနိုင်သောဖန်သားပြင်ကိုအလုပ်လုပ်ရန်တားဆီးသောဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးကျွန်ုပ်ထဲဝင်လာသည်။
ခလုတ်များမှတစ်ဆင့်မည်သို့ပြန်လည် reset နိုင်မည်နည်း။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းမှကျွန်ုပ်သည်ပရိုဂရမ်များကိုတပ်ဆင်သည်။ ကျွန်ုပ်မလုပ်ချင်ပါကဆဲလ်ဖုန်းကိုပြန်လည်စတင်သည်။ သို့သော်အသုံးချပရိုဂရမ်များကိုဖျက်သိမ်းခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုမသိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
android ရှိဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ရန်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအဖြစ်လမ်းညွှန်သည်အလွန်ကောင်းသောလမ်းညွှန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်ရှိသည့်အမှုကိုဖယ်ရှားရန်ပိုမိုခက်ခဲလာသည့်အခြားဗိုင်းရပ်စ်များရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အဆင့်များအားလုံးပြီးအောင်လုပ်ပြီးဖြစ်သည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုမှဖယ်ထုတ်လိုက်သောထို apk တွင်ဗိုင်းရပ်စ်အချို့ထိုးသွင်းသည်။ ၎င်းကို xD နည်းဖြင့်မဖယ်ရှားပါ
မေရီ ventip ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ Motorola d3 တွင်လုံခြုံစိတ်ချရသောစနစ်သို့ ၀ င် ရောက်၍ မရပါ။ အထိန်းသည်ပြောသည့်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ရန်ကြိုးစားသော်လည်းကျွန်ုပ်အားခွင့်မပြုပါ။ ကြိုပြီးကျေးဇူးပါပဲ
Mary ventip ကိုပြန်သွားပါ
SD ထဲရှိ sys ဖိုင်တွဲကိုရှာပါ
ဒီမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့ install လုပ်သော apps များလာကြ၏
တိုင်းမကြာခဏသံသယဖြစ်ဖွယ် applications များပိတ်
ငါကပြောပါတယ် apps များဖယ်ရှားပစ်ပုံကိုကူညီပါ
tebgo7application မ်ား
ဆဲလ်ဖုန်းကို reset တဲ့အခါမှာ ..
ငါ့မှာ galaxi Grand2ရှိတယ်။ တချို့ application တွေမွမ်းမံတဲ့အချိန်အထိကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ အက်ပလီကေးရှင်းထဲဝင်ပြီးအချိန်တစ်ချိန်လုံး restart လုပ်တယ်။
သူငယ်ချင်း၊ မင်းပြောသမျှကိုငါလုပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဗိုင်းရပ်စ်ပျောက်အောင်မလုပ်နိုင်သေးဘူး၊
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက system application တစ်ခုလိုဟန်ဆောင်နေလို့ပဲ
တူညီသော application သည် Engrils ဟုခေါ်သည်။ Qysly.S "Variant"
IS.JAR လည်းရှိပြီး Qysly.S « Variant »ကပြောသည်။
Engrils အပြင် TrojanDropper.Agent.FN "Variant" တွင်ဖော်ပြထားသည်
ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါကျွန်ုပ် ကျေးဇူးပြု၍ mrporn အက်ပ်ကိုမဖြုတ်နိုင်ပါ
Valencia Ale ဟုသူကပြောသည်
MALWARE နှင့် TROYANO သူတို့မသိကြပါကကျွန်ုပ်မသိပါ။ ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ပျက်အားလျော့နေပါပြီ၊ လျှောက်လွှာများကိုတစ်ပါတည်းထည့်သွင်းတပ်ဆင်ထားပြီး၎င်းသည်အလုပ်ဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်သည်ဆဲလ်ဖုန်းနှင့်တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်သာတက်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်တော်သည် Antivirus နှင့် IOOK တို့ဖြင့်အဝေးသို့သွားခဲ့သည်။ သူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ပါ။ DISIST-LO မဖြစ်နိုင်ပါ။ အမှားကကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာမှတိုက်ရိုက်ကြိုးစားကြည့်ပါ။ ဤပုံစံကိုသာဖျက် ပစ်၍ ၎င်းကိုပုံမှန်မဟုတ်ဘဲကွန်ပျူတာနှင့်လည်းပါ ၀ င်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် WIFI သို့မဟုတ်ဒေတာမရှိလျှင်၊ ငါလုပ်နိုင်သလား။ တစ် ဦး ကအာမခံအဖြစ်အကောင့် ဆဲလ်ဖုန်းကိုတွေ့ပြီအိုင်တီကိုထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုရင်မပါဘူးဆိုရင်ငါဖုန်းဆဲလ်ဖုန်းဘယ်လိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူမှမသိဘူး။
Ale valencia အားပြန်ပြောပါ
ကောင်းမွန်သောညနေခင်းတွင်ကျွန်ုပ်သည် Trojan virus များ၊ device ကိုချိတ်ထားခြင်းသို့မဟုတ် application များကိုခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ install လုပ်သောကျွန်ုပ်မဖျက်နိုင်သည့် (လုံခြုံရေးစနစ်များ၊ firewall နှင့်အချိန်ဝန်ဆောင်မှု) malware များစွာရှိသည်။ ငါဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းခြင်းနှင့်ကြိုးစားပြီးဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်စက်လည်ပတ်မှုစနစ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဘာမျှမလုပ်ရ၊ ၎င်းတို့သည်ထပ်မံပေါ်ပေါက်လာဆဲဖြစ်သည်။ တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာသူတို့ကိုပိတ်ထားရန်မပြသောကြောင့်ဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်သို့မဟုတ်ဝိုင်ဖိုင်ဒေတာကိုသုံးသောအခါစတင်သည်။ App or install လုပ်ခြင်း၊ ငါ gmail အကောင့်မှအခြားတစ်ခုသို့ပြောင်းလဲရန်ကြိုးစားခဲ့ပြီးနောက်တစ်ခါပြန်ပေါ်လာသည်။ ဤဗိုင်းရပ်စ်များကိုလုံးဝသို့မဟုတ်လုံးဝဖျက်ရန်ထိရောက်စွာဘာလုပ်နိုင်သလဲ။ ဒီဆော့ဗ်ဝဲကိုဖျက်ပြီးစက်ရုံမှအခြားတခုကိုထည့်သွင်းမည်လား။
Luis Miguel ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မှာ blu study c blu study ရှိတယ်၊ ငါမဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့ virus ရှိတယ်၊ ငါလုပ်သမျှအရာအားလုံးကိုလုပ်ပြီးပြီ။ ငါစုစုပေါင်းဗိုင်းရပ်စ်လို့ခေါ်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဖယ်ရှားလိုက်ပြီး stubbrn troja ကဗိုင်းရပ်စ်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ပြီးအဲဒါတွေကိုမဖယ်ရှားနိုင်ဘူး၊ အမြစ်တွယ်နေသောအန္တရာယ်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်အားကူညီနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါ
Luis Miguel ကိုပြန်ပြောပါ
"LINK2SD" အပလီကေးရှင်းဖြင့်ဗိုင်းရပ်စ်ကိုအေးခဲအောင်လုပ်ပါ။ ၎င်းသည်စက်ရုပ်အသုံးပြုရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းကို CM Security antivirus ဖြင့်ဖယ်ရှားပါ။
Engrils Qysly.S မှ
Adobe က Air လေကြောင်းလိုင်း
ဒါ့အပြင် ESET ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးအတွက်လည်းကျွန်တော်ကို quarantine virus များစီမံခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် CM Security ကို Google Play မှဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့ရသောအကောင်းဆုံး antivirus တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ application များအားပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းကိုကန့်သတ်ရန်၎င်းကို device administrator အဖြစ်ထားရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။
ငါ့အရင်သတင်းစကားမှာငါဆိုလိုတာက Link2SD application ကိုအသုံးပြုရန် root user ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။
၎င်းသည်သင့်စက်အတွက်တရားဝင်နောက်ဆုံးသတင်းများရှိသလားသို့မဟုတ်နောက်ဆုံးပေါ် Android ဗားရှင်းရှိသည့် ROM တစ်ခုရရန်နည်းလမ်းရှိ၊ မရှိကိုကြည့်ပါ။ ဤပျက်ကွက်မှုသည်သင်၏စက်တွင်ထည့်သွင်းထားသောအန္တရာယ်ရှိသောကုဒ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ အကယ်၍ သင်သည်စက်ရုံပြန်လည်တည်ဆောက်မှု (သို့) အခြားဂူးဂဲလ်အကောင့်ကိုသုံးသည်ဆိုလျှင်ပင်၊ ထိုအရာသည်သင်ထပ်မံကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်။
တရား ၀ င်အသစ်ပြောင်းခြင်းကိုသင်မတွေ့ရှိပါက ROOT ကို ရယူ၍ ပိုမိုကြီးမားသော Android ဗားရှင်းကိုထည့်သွင်းရန်စိတ်ကြိုက် ROM တစ်ခုကိုရှာပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီးပြောပြပါ။ မင်္ဂလာပါ။
Yolanda Prados သည်ပျက်စီးသည် ဟုသူကပြောသည်
ကူညီရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းသည်စွမ်းအင်စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးမည်သည့်အရာနှင့်မျှမလုပ်နိုင်ပါ။ ဗိုင်းရပ်စ်ကိုတပ်ဆင်ထားပြီး၎င်းသည်အင်တာနက်နှင့်သာချိတ်ဆက်နိုင်သည့်အင်တာနက်နှင့်ကျွန်ုပ်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
Yolanda Prados ruiz သို့ပြန်သွားပါ
ခွင့်ပြုပါ။ ကျွန်ုပ်မှာဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးရှိနေပေမယ့်အဲဒါကိုဖျက်လို့မရပါဘူး။ တခြား application တွေကို download လုပ်လို့ရပါတယ်။
က Natalia ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ အချက်အလက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ် Trojan ကိုမဖယ်ရှားနိူင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ် download လုပ်ထားသော application တွင်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ tablet ၏ android system ၌ကျွန်ုပ် install လုပ်ထားသော antivirus သည်၎င်းကိုရှာဖွေပြီးကျွန်ုပ်ထံသို့ပို့ဆောင်ပါသည်။ သင် "force stop" သို့မဟုတ် "uninstall" ကိုထည့်နိုင်သော်လည်းထို cores ၂ ခုသည်အရင်ကမပေါ်လာသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ဘာမှ လုပ်၍ မရပါ။ ငါစက်ရုံကနေ2ကြိမ်ဖြစ်သကဲ့သို့ငါတက်ဘလက်ကိုပြန်လည်စတင်ပြီးပြီနှင့် Trojan ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ငါဘာကြိုးစားရမလဲမသိဘူးလား။ ငါတကယ်တန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်
monserrat vs. ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါကောင်းပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တွင် alcatel one touch6012A တစ်ခုရှိသည်။ သို့သော်ဤကြေငြာချက်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်ထင်ရှားသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Canselar ကိုပေးသည်။ ၎င်းကိုငါမဖယ်ရှားပါ။ ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်မျက်နှာသို့မဟုတ်မက်ဆေ့ခ်ျများရှိသလဲ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားပြောပြသည်။ လျှောက်လွှာတစ်ခုနှင့် QIRTENIA လေးခု၏ဗားရှင်းကိုငါရယူလိုက်ပါ။ ထိုအရာကိုကျွန်ုပ်မည်သည့်အရာဖယ်ရှားရမည်နည်း။
monserrat vs. တုံ့ပြန်ရန်
ကောင်းသောနေ့လည်ခင်း, ငါ vel ဟာ pornclub နှင့်အတူရှိ၏, ငါမဖယ်ရှားပစ်နိုင်, hao
ငါနဲ့ထပ်တူဖြစ်ခဲ့တာငါပြန်ဖွင့်တယ်၊ ငါဘက်ထရီကိုဖယ်လိုက်တယ်။ ဘာမှမရှိဘူး။ ဗစ်တာ၊
ချစ်ခင်ရပါသော - ကျွန်ုပ်၌ Huawei G Play ရှိသည်။ ပြနာကဗိုင်းရပ်စ်နှင့်သက်ဆိုင်တယ်။ ငါဆဲလ်ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ format ချပြီး .. ဆက်ပြီးပေါ်နေတယ်။
ငါသူ့ကို Serv သို့ခေါ်သွားတယ် သူတို့ကအဲဒါဟာအဖြေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်။
၎င်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်သည်။ ငါ့ကိုဘယ်သူကူညီပေးနိုင်မလဲ ??
Shedun.main.j သည်ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပြီး Firewale Service တွင်တွေ့နိုင်သည်
ပထမအချက်အနေဖြင့်အောက်ပါစာသည်ရှည်လျားသည်ဟုဆိုရမည်မှာသေချာပါသည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်ကအားလုံးကိုဖတ်ပါက၎င်းကသင့်ကိုကျွန်ုပ်နှင့်ထပ်တူချေးငှားသည်ဟုတ်မဟုတ်ကိုကြည့်ရန်ဖြစ်သည်။
ဒုတိယအချက် - ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်သည်အမြစ်တွယ်နေသောကြောင့်သို့မဟုတ် root mode တွင်သာအလုပ်လုပ်သောကြောင့်သင်သိရန်အရေးကြီးသည်။ (အကယ်၍ သင်၏ကွန်ပျူတာသည်အမြစ်တွယ်မထားပါက၎င်းသည်သင့်အတွက်လည်းအကျိုးရှိနိုင်သည်။ သို့သော် LINK2SD အက်ပလီကေးရှင်း၏အစိတ်အပိုင်းကိုကျော်သွားပြီးအခြားအဆင့်များအတိုင်းဆက်လက်ကြည့်ရှုသင့်သည်။
လွန်ခဲ့သော ၃ ပတ် ၄ ပတ်ခန့်ကကျွန်ုပ်ဆဲလ်တွင် "Engrils Variante" ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်အခြားဗိုင်းရပ်စ်များစွာနှင့်အတူ engrils သည် application applications များနှင့်မလုပ်နိုင်ဟုယူဆရသော applications များနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်များကိုတပ်ဆင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ အလွယ်တကူဖယ်ရှားနိုင်သည် ...
၁) Engrils « Qysly.S »
2) Engrils « TrojanDropper.Agent ။ FN »
၃) Adobe Air
၄။ IS.JAR « Qysly.S »
၁။ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဆုံးဖြစ်သော "Engrils" ဗိုင်းရပ်စ်ကိုကာကွယ်ရန် Link1SD ကို Install လုပ်ပါ။
၂။ Stubborn Trojan Killer application ကို install လုပ်ပြီး run ပါ။ ၎င်းသည် system ပေါ်ရှိ Trojans အားလုံးကိုဖယ်ရှားသင့်သည်
၃) CM Security ကို install လုပ်ပြီး run ပါ။
မှတ်ချက် ၁) ဤအချက်အလက်အများစုသည်အခြားဖိုရမ်တစ်ခုမှအသုံးပြုသူထံမှမက်ဆေ့ခ်ျမှရယူခြင်းခံရသည်။ ဒီလူအတွက်ချေးငွေ။
မှတ်ချက် ၂) Stubborn Trojan Killer အလုပ်လုပ်သင့်သော်လည်းကျွန်ုပ်ကိစ္စတွင် ...
သို့သော် CM Srcurity သည်နှောင့်နှေးနေသော "Engrils" အပါအ ၀ င်ဗိုင်းရပ်စ်များအားလုံးဂရုပြုခဲ့သည်။
အထက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း applications တွေအားလုံးကို download ချပြီး run ရန်အကြံပေးလိုပါတယ်။ သင်လိုချင်ရင် CM Security ကို download လုပ်ပြီးသင့်ကိုယ်ပိုင် device သို့သွားပါ။
မှတ်ချက် ၃) engrils ပြwithနာကအမြဲတမ်းဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်တယ်၊ ဒါကသင့်ကိုသက်ရောက်မှုရှိတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တမျိုးအပါအ ၀ င်၊ ဖယ်ထုတ်ပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာမှာပြန်ပေါ်လာနိုင်တယ်။
ထို့ကြောင့်ငါပြောရမည်မှာ၊ စနစ်မှဗိုင်းရပ်စ်အားလုံးကိုဖယ်ရှားပြီးသည့်နောက် ၁၂၀ မှ ၁၂၅ နာရီအတွင်းကျွန်ုပ်၏စနစ်တွင် "Engrils" ထပ်မံပေါ်လာသည်။
သို့သော်ဤတစ်ကြိမ်တွင်မူဖယ်ရှားရန်ပိုမိုလွယ်ကူခဲ့သည်။ ရွေးချယ်မှုများ၊ လျှောက်လွှာစီမံခြင်းနှင့်ဖျက်ပစ်ခြင်းသို့သွားပါ။
Note4) ဤ application များမှအထူးသဖြင့် CM Security ကိုမဖျက်ရန်အရေးကြီးသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်၏အခြားလူကြိုက်များသောဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဗ်ဝဲများဖြစ်သော avast mobile antivirus (ဗိုင်းရပ်စ်အားလုံးကိုပင်အသိအမှတ်မပြုသော) သို့မဟုတ် ESET Mobile antivirus တို့ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဖျက်သိမ်းမခံခဲ့ရ ...
မှတ်ချက် ၅) ဗိုင်းရပ်စ်အချို့သည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပရိုဂရမ်းမင်းကုဒ်များကြောင့်ထပ်မံပေါ်ပေါက်လေ့ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ပြောခဲ့သည့်အချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်း စား၍ ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသောဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးများ (Trojan killer, CM Security နှင့် ESET) ကိုအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်လည်ပတ်လျှင်ကောင်းပေလိမ့်မည်။ တစ်ရက်မှာလူတစ်ယောက်ကိုလာကြည့်ပါ၊ တစ်ရက်မှာ ၁၅ မိနစ်လောက်ပဲရှိတယ်။
ငါထပ်ခါတလဲလဲငါပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ကနေဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည်ငါ tools တွေကို run ပေမယ့်,4သို့မဟုတ်5ရက်အကြာမှာ, သူတို့ထဲကတ ဦး တည်းစနစ်၏ကာကွယ်မှုနှင့်ဤအချိန်ဖယ်ရှားပစ်ရန်အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူပေမယ့် ...
မှတ်ချက် ၆။ နောက်ဆုံးမှာ“ Unknown sources” option ကိုအမြဲတမ်းပိတ်ထားပါ။
အချို့သောဗိုင်းရပ်စ်များကသင့်အား၎င်းကိုပိတ်ထားရန်ခွင့်မပြုသော်လည်းသင်ဖယ်ရှားလိုက်သည်နှင့် ကျေးဇူးပြု၍ ၎င်းကိုပိတ်ပါ။
Note7) ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်ပြောသော application အားလုံးသည် Google Play မှဒေါင်းလုတ်လုပ်နိုင်သည်။
ဒါ့အပြင် CM Security ကို device administrator အဖြစ်ထားလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါကငါ့ကို device ကိုပိုပြီးကာကွယ်ပေးနိူင်တယ်၊ အထိခိုက်မခံတဲ့ applications တွေဆီမှာသော့ဖွင့်ဖို့နေရာတွေထားပေးတယ်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်လုပ်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်သည် ၁၀၀% အလုပ်လုပ်သည်။
လွန်ခဲ့သောတစ်လကကျွန်ုပ်သမီး ၉ ယောက်အတွက်တက်ဘလက်ကို Hello Kity အမှတ်တံဆိပ်မှ ၀ ယ်ယူခဲ့ပြီးထိုဗိုင်းရပ်စ်ကိုစုစုပေါင်း ၃၆၀ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ့ရှိခဲ့သဖြင့် google calendar plugin service သည် application များစွာတပ်ဆင်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ 9RAM မှတ်ဉာဏ်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်မဖျက်နိုင်ပါ။ ငါ့ကို option ကိုမပေးပါဘူး, disable လုပ်ဖို့ option ကိုမီးခိုးရောင်ဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ ၎င်းကိုသင့်အားရွေးချယ်ခွင့်မပေးပါက၎င်းသည်စနစ်ဖိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်မှာစွမ်းဆောင်ရည်အားနည်းချက်ရှိလား၊ ဒါမှမဟုတ်ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကိုတားဆီးတဲ့သင်၏တက်ဘလက်မှာတစ်ခုခုဖြစ်ပျက်နေသလား။
Andrea reyes ဟုသူကပြောသည်
အန္တရာယ်ကင်းစွာ ပြန်လည်စတင်၍ မရပါကျွန်ုပ်ဘာလုပ်သင့်သနည်း။
Andrea Reyes အားပြန်ကြားပါ
သင့်မှာဘယ်လိုပစ္စည်းကိရိယာရှိပါသလဲ။ ROOT အထူးအခွင့်အရေးရှိပါသလား။
မင်္ဂလာပါကောင်းသော Manuel, ငါ့သားတွင် S6 laudvo ရှိသည်။
ငါလည်းမင်းဘောင်းဘီတိုတွေ၊ Kingroot နဲ့အတူ၊ ငါထွက်လာတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်ခဲ့ပြီ၊ ဒါပေမယ့်မထွက်နိုင်သေးဘူး၊ ဒီနေ့ကောင်လေးကမှတ်စုထဲမှာပြောသမျှအရာအားလုံးကိုငါစမ်းကြည့်တော့မယ်။ မင်း
ဒါပေမယ့်ပြtheနာကလွဲလို့ကျန်တဲ့တခုခုကိုငါပယ်ဖျက်လိုက်မယ်၊ အဲဒါကငါ့ကိုစတိုးဆိုင်ကို install ခွင့်ပေးတယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုဖွင့်တဲ့အချိန်မှာသူကငါ့ကိုခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး၊ ငါဟာလျှို့ဝှက်ချက်လက်မှတ်ပျောက်ဆုံးနေတယ်၊ gmail အကောင့်။
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းမှာငါလုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ငါလုံခြုံစိတ်ချစွာမရခဲ့ဘူး၊ ငါပြန်လည်ကြိုးစားမှု ၃ ချက်ရတယ်၊ အဲဒါကငါကြိုးစားခဲ့တာမြန်ပြီးပုံမှန်ပဲ။
နှင့် engrils အတွက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
Diego Armando ဟုသူကပြောသည်
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ android တွင် application တစ်ခုကိုထည့်သွင်းထားသော်လည်းကျွန်ုပ်၏ macafee antivirus က၎င်းကို malware ဗိုင်းရပ်စ်အဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့သော်လည်းမည်သည့်အရာကိုမဆိုဖယ်ထုတ်။ မရပါ၊ အနီးကပ်အတင်းအကျပ် လုပ်၍ disable လုပ်ပါ။ သင်၏စာမျက်နှာရှိညွှန်ကြားချက်များကိုကျွန်ုပ်လိုက်နာပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသော mode သို့ဝင်ရောက်ပါ။ သို့သော်ဖယ်ထုတ်။ မရပါ။
Diego Armando သို့ပြန်သွားပါ
မင်္ဂလာပါ Emmm ကောင်းစွာကျွန်ုပ်၌၎င်း engril ဗိုင်းရပ်စ်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကို (root မပါဘဲ) ဖျက်ပစ်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ ဖုန်းကို root လုပ်၍ ဖျက်ပစ်ရန်ကြိုးစားသော်လည်းမည်သည့်အရာမျှမပြုလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်သင်၏ခြေလှမ်းများနှင့်ဘာမှမလုပ်ပါ🙁ကျွန်ုပ်အဆိုအရ ဗိုင်းရပ်စ်သည်အမှန်တရားကိုလိုက်နာသောကြောင့်၎င်းသည်၎င်းကိုမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်သို့မဟုတ်ပြန်လည်စတင်ခြင်းအလုပ်မလုပ်ကြောင်းဖတ်ပါ၊ ဗိုင်းရပ်စ်ကိုကျွန်ုပ်က၎င်းကိုပိတ်ထားခြင်းဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်ပင်ပန်းနေသော်လည်းဖုန်းကို restart လုပ်၍ Wi- ကိုဖွင့်တိုင်းတိုင်း Fi၊ ဖယ်ရှားရန်ပိုမိုလွယ်ကူသောဗိုင်းရပ်စ်များစွာထပ်မံတပ်ဆင်ထားပါသည်။ အမှန်တရားမှာ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အားကူညီနိုင်ပါကကျွန်ုပ်အလွန်အပူတပြင်းရှိပါသည်။
ငါ engril ဗိုင်းရပ်စ်ကိုဖယ်ထုတ်နိုင်ပေမယ့်ကျွန်ုပ်မှာပျောက်ဆုံးနေဆဲ ၅ ခုရှိပါသေးတယ် (ဘယ် virus နှင့် trollane လဲဆိုတာကိုသင်သိနိုင်ပါတယ်)
Adobe air ပါ
Google က upate ပေးဆောင်
အမှန်တရားကသူတို့ကိုငါမဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့လို့သူတို့ကိုငါ disable လုပ်ခဲ့ရတယ်။ trollan killer နှင့် cm လုံခြုံရေးလွန်သွားပြီးနောက် (ကစားစတိုး၌တွေ့ရသော) engril ကိုရပ်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းအားဖြင့် Engril ကိုဖယ်ထုတ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာအတွက် rom (ဖုန်းကိုပြောင်းလဲရန်) တစ်ခုတည်းသောအဖြေမှာ (ကျွန်ုပ်မကြိုးစားသေးပါ။ ) ၎င်းကိုမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် trolls များဆက်လက်တည်ရှိသည်ဟုပြောသောကြောင့်၎င်းကိုမနှိုးချင်ပါ။ do
ငါ LG lg-p768 ရှိသည်
Android 4.1.2 (jelly_bean) ဖြင့်
စနစ်အားခေတ်မီအောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည် Trojans များ၊ malware များမကူးစက်စေရန်တားဆီးထားသောမကြာသေးမီကလုံခြုံရေး patch များကိုအသုံးပြုခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ သငျသညျ ROM ကိုကြိုးစားအားဖြင့်ဘာမျှမရှုံးသည်။ သင်၏ terminal ကိုရှာရန် HTCmania ကိုစမ်းပါ။ မင်းတို့ကိုမင်းတို့ပြောပြီးပြီ။ မင်္ဂလာပါ။
ကောင်းမွန်သောည၊ ကျွန်ုပ်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်၌အမှားအတူတူပင်၊ ဗိုင်းရပ်စ်အတူတူပင်၊ ၎င်းကိုဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းမှာကွန်ပျူတာကို root လုပ်ရန်နှင့် KINGROOT တွင်ထည့်သွင်းထားသော PURIFY ကိုထည့်သွင်းပြီးပါက၊ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာ "tools" option ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ထိုနေရာမှ "Inflated Software Remover" သည်သင်အားနှောင့်ယှက်နေသောအက်ပလီကေးရှင်းများကိုတိုက်ရိုက်ဖျက်သိမ်းနိုင်ပြီးသင်၏ကွန်ပျူတာကိုထပ်မံပေါ်ပေါက်လာသည့်ပြproblemနာမရှိဘဲပြန်လည်စတင်ရန်သေချာနိုင်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာ galaxy grand prime ရှိပြီး com.google.system.s လို့ခေါ်တဲ့လအနည်းငယ်မှာဗိုင်းရပ်စ်တစ်ခုရှိနေပါတယ်။ ငါ uninstall မလုပ်နိုင်သော status ကိုရဖို့ကြိုးစားလျှင်, မျက်နှာပြင်ပျက်သွားသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ။ /
မင်္ဂလာပါ၊ လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ကကျွန်ုပ်တွင် ideatab a2 ရှိခဲ့ပြီးအရာအားလုံးအဆင်ပြေပါသည်။ သို့သော် Engriks pornclub mobile secyryti နှင့်အခြား application များကဲ့သို့သောအပလီကေးရှင်းအများစုမှာအငြင်းပွားစရာများ၊ အမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်သည်ဘာမျှမလုပ်နိူင်သောကြောင့် windows များနှင့်ကြော်ငြာများသည် ငါ့ကို
ဘာလို့လဲဆိုတော့ humanware သည်ညစ်ညမ်းသောဆိုဒ်များထဲသို့ ၀ င်ရောက်ပြီးထိုဗိုင်းရပ်စ်အားလုံးသည်ထိုနေရာမှလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ antivirus ezet မှရလဒ်များကိုသာဖော်ပြသည်။ အရာရာကိုကြိုးစားပြီးဘာမှမလုပ်ခဲ့ပါ။ အဲဒီ erotic စာမျက်နှာများနှင့်ယခုသူတို့နောင်တရပေမယ့် byeee ကျေးဇူးတင်ကြောင်းကို deactivate လုပ်ဖို့သူတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့လိုတဲ့အဲဒီ applications တွေကိုပိတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး
၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်ဘာမျှမဟုတ်ပဲ application တစ်ခုတည်းကိုသာ download လုပ်ခြင်းသည်ကူညီသည်
မင်္ဂလာပါ။ အားလုံးပြhaveနာတစ်ခုရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်မှာ alcatel one touch idol2mini ရှိတယ်။ ငါကြိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့်လွန်ခဲ့တဲ့သုံးပတ်ကကျွန်မရဲ့မူလမြင်ကွင်းမှာ pornclub လို့ခေါ်တဲ့ application တစ်ခုကိုတွေ့လိုက်တယ်။ ငါအဲဒီမှာဘယ်လိုရောက်လဲမသိဘူး၊ အလှအပဗီဒီယိုများနှင့်အခြားသူများကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန် ... ကျွန်ုပ်အားလုံးကိုပိတ်ထားသော်လည်းသူတို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုအနှောင့်အယှက်ပေးနေသဖြင့်ကျွန်ုပ်ဒေါသထွက်ကာဆဲလ်ဖုန်းကိုပြန်လည်ဖွင့်သည်။ သို့သော်အက်ပလီကေးရှင်းများမပျောက်ကွယ်သွားပါ၊ bluethoot နဲ့ wi fi network တစ်ခုခုကိုငါမဆက်သွယ်ချင်ဘူး၊ ငါလုပ်ရင်ဒီဟာကတကယ်ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်။ ငါတကယ်အကူအညီလိုတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အားလုံးကိုလေးစားစွာဖြင့်ငါဆိုသည်မှာကျွန်ုပ်တွင်ကောင်းမွန်သော irulu u1 အဖွဲ့သည်တစ်နှစ်ခွဲခွဲကြာပြီးတစ်ပတ်တွင်ဗိုင်းရပ်စ် ၂ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းတွင် avg antivir များ၊ သန့်ရှင်းသောမာစတာ၊ ခေါင်းမာသော Trojan လူသတ်သမား၊ kaspersky၊ avg cleaner၊ cm လုံခြုံရေးနှင့်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းသည်။ ၎င်းတို့သည်သေချာသည့်ပုဝါပုဝါများဖြစ်သည်၊ Trojan များသည်စနစ်တွင်အေးခဲသွားသည် (deactivated) သို့သော်မဖျက်ရ။ ငါရေးသားထားသောအရာခပ်သိမ်းတွင်အလွန်ကောင်းမွန်ပုံရသောဖိုရမ်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ပြီးပါပြီ၊ သို့သော်စနစ်အတွင်းရှိရေချိုမှု ၁၀၀% ကိုကျွန်ုပ်ဖယ်ရှားပေးသည့် application တစ်ခုကိုမည်သူမဆိုသိပါကကျွန်ုပ်တန်ဖိုးထားပါမည်။
maria calderon ဟုသူကပြောသည်
ငါမှာ mmi liquits အမှတ်တံဆိပ်တက်ဘလက်တွေနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြproblemနာရှိနေတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်တစ်လုံးဝင်လာတယ်။ မယုံနိုင်လောက်အောင်ညစ်ညမ်းတဲ့အက်ပလီကေးရှင်းတွေကိုတပ်ဆင်လိုက်တယ်။ စက်ရုံကနေအုပ်ချုပ်တာဘာမှမရှိဘူး။
maria calderon အားပြန်ကြားပါ
ငါဖွင့်လိုက်သော alcatel ကိုဆက်ထားသည်။ ဒဏ္theာရီပေါ်လာသည်။ system.tool application သည်ရပ်တန့်သွားပြီးကျွန်ုပ်ကိုဖုန်းထဲမဝင်ပါ။
ANDROID ကို Antivirus မထည့်သင့်တာအကောင်းဆုံး !!!!, ငါ့သားကကွန်ပြူတာများ၊ စနစ်များနှင့်အခြားအရာများ၌၎င်းကိုပြောဆိုသည်။ ANDRID အိုင်တီအတွက်အလုပ်မလုပ်သော်လည်းကျွန်ုပ်ပြောပြသည်။ စုစုပေါင်းလက်ဆောင်ဆုံးရှုံးမှု MALWARE !!! !! သူတို့သည်ငါ့ကိုဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်။ ထိုအခါငါ Antivirus မပါရှိသည့်အခါ Q သည်မည်သည့်အရာကမည်သည့်အရာနှင့်မည်သည့်အရာအားအသိပေးသင့်သည်ကို CEL လမ်းလျှောက်မည်မဟုတ်ပါ၊ !!!!! တစ် ဦး ကပွေ့ဖက်!
ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းဖုန်းသည် XPERIA E3 စိတ်မကောင်းစရာမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထုတ်လုပ်သူ၏ပံ့ပိုးမှုစာမျက်နှာပေါ်တွင်သင်၏ Alcatel အတွက်တရားဝင်နောက်ဆုံးသတင်းကိုရှာဖွေပါ။ သင့်မှာမရှိသေးပါကသင့်ဖုန်းကို Android ဗားရှင်းအသစ်သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်စိတ်ကြိုက် ROM များရှိမရှိသိရန်သင့်လျော်သောဖိုရမ်တွင် HTCmania သို့ ဦး တည်ပါ။ မင်္ဂလာပါ။
ဟယ်လိုဘယ်သူမဆိုငါ့ကိုကူညီနိုင်မလားငါမဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ malware အမျိုးအစားဗိုင်းရပ်စ်သုံးခုရှိတယ်။ Mp3 free downloader နှင့်အခြားနှစ်ခုတို့သည်ကျွန်ုပ်အား administrator ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး application များအဖြစ်ထင်ရသော်လည်း anvas က uninstall လုပ်ရန်ခွင့်မပြုသော်လည်းကျွန်ုပ်လုပ်သင့်သည်ကို deactivate နှင့် activate လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်သည် antivirus တော်တော်များများကို install လုပ်ထားပြီးပါပြီ avg as အပြည့်အဝဗားရှင်းကို download လုပ်ပါကနေဆဲမဖျက်နိုင်ပါ
aptoide လို့ခေါ်တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုကူးယူပြီးအဲဒီကနေညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ application တွေကို download လုပ်ခွင့်မပြုပါဘူး။
ဟယ်လို!! ကျွန်ုပ်နှင့်အလားတူဖြစ်ရပ်တစ်ခု၊ ကျွန်ုပ်သည် aptoide အတွက်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုကူးယူပြီးသောအခါ mrporn ဟုခေါ်သောအက်ပလီကေးရှင်းမှညစ်ညမ်းသောပုံရိပ်များကိုရရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းသောဆာဗာသို့ဖုန်းခေါ်နေသည်ဟုခံစားမိစေသည်။ လုပ်တယ်
settings> about> software updates မှ system updates ရှိသလားကြည့်ပါ။ ၎င်းတို့သည်လုံခြုံရေးအားနည်းချက်များဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အဆင့်မြှင့်ထားသော terminal ရှိပါကအများစုကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။ ခင်ဗျားကငါ့ကိုနှုတ်ဆက်တယ်။
ဖုန်းကို restart လုပ်ပါ
ငါ့မှာ Trojan တွေအမြဲရှိနေတယ်၊ ​​ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဖ်ဝဲလ် (ဒီပြthanksနာကြောင့်ငါကြိုးစားခဲ့တယ်)၊ သူတို့ဖယ်ရှားလိုက်တယ်၊ ပြန် install လုပ်တယ်။ ငါမှာဂျူး ၃ ယောက်လောက်လည်းရှိတယ်၊ ငါလုပ်ခဲ့တာတွေအတွက်ငါလုပ်ခဲ့တာတွေအားလုံးကိုငါလုပ်ခဲ့ပြီးဖြေရှင်းချက်ကိုမတွေ့နိုင်ဘူး!?
သင့်ကိရိယာအတွက်တရားဝင်အသစ်ပြောင်းခြင်းကိုစစ်ဆေးပါ။ နောက်ထပ်ရွေးစရာတစ်ခုမှာလုံခြုံရေးအားနည်းချက်များကိုပြုပြင်ရန်ထုံးစံ ROM တစ်ခုဖြစ်သည်
ငါ၌အမွေးပါသောစာရွက်တစ်လုံးရှိပြီးကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အတိုင်း GRINKS များကိုမဖျက်နိုင်ပါ။
တရား ၀ င်အသစ်ပြောင်းခြင်းများရှိ / မရှိကြည့်ပါ။ မင်္ဂလာပါ။
Haroldman ၇၆ ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာနံနက်ခင်း၌, ငါ "engriks" ဗိုင်းရပ်စ်နှင့်ကြုံခဲ့ရသည့်အခက်အခဲကိုမျှဝေချင်ပါသည်။ ဖြေရှင်းနည်းမှာ ၂ ခုမှာ hard reset၊ အင်တာနက်နှင့်မချိတ်ပါနှင့် applications ကိုကျွန်ုပ်တပ်ဆင်နိုင်သည့် Mobilego program (my computer) ကိုသုံးပါ။ အောက်ပါ2Security ပါရှိသောဗိုင်းရပ်စ်များကိုကျွန်တော်ဖယ်ရှားနိုင်ပါပြီ။ ၎င်းကိုထည့်သွင်းပြီးကိရိယာကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်ကူးစက်ခံထားရသော application များကို (ဖယ်ထုတ်ခြင်း ၁ ခု၊ ဒေတာ ၂ ခုဖျက်သိမ်းခြင်း၊ အသုံးချခြင်းအားရပ်တန့်ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်အက်ပလီကေးရှင်းကိုပိတ်ခြင်း) ကိုဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့သည်။ Mobilego ၏ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် PC မှ applications များကို install လုပ်၍ KingRoot ဖြင့်လုပ်ခဲ့သည် (တစ်ချိန်ကအမြစ်တွယ်ခဲ့လျှင်၊ Link360SD ကိုကူးယူပြီးကျွန်ုပ်၏ကိစ္စများတွင်ဖြစ်ပျက်မည့်အေးခဲသော application များ၊ Adobe လေနှင့် engirls များကိုဖျက်ပစ်နိုင်သည်။ )
၎င်းကိုနံပါတ်တစ်ခုနှင့်ထပ်တူဖြစ်သော whatssap အကောင့်နှစ်ဆပေးမည်ဟုကတိပေးထားသည်။
ငါကလုံခြုံ mode ကိုသို့လိုက်။ ကဖယ်ရှားခဲ့သည်။ p_t_ / အကြံပေးချက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ဒါကောင်းတယ်
ဟိုဆေး Sanchez ဟုသူကပြောသည်
အားလုံးသတိပြုပါ၊ ငါပြောချင်တာကငါ့မှာ samsun s6 ပုံတူမျိုးပွားပြီးငါ့ကိုဝင်ရောက်ခွင့်မပြုတဲ့ root မှာဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့ခဲ့တဲ့အတွက်မကြာသေးမီရက်တွေကပျောက်ကွယ်သွားတော့တယ်၊ စကားဝှက်ရေးဖို့မျက်နှာပြင်တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ဘာမှဖြစ်ပျက်မှုမရှိ၊ သင်စနစ်ထဲသို့မ ၀ င်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အထက်ဖော်ပြပါဗိုင်းရပ်စ်များစွာရှိပြီးအရာအားလုံးကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်မ ၀ င်နိုင်ပါ၊ သင်ဖွင့်ပြီးအလိုအလျောက်ဖွင့ ်၍ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားဘာမှမလုပ်နိုင်သည့်မျက်နှာပြင်ကိုထည့်သည် အရှုံးပေးပြီးပါပြီငါအဖြေကတော့ rom ကိုပြောင်းဖို့ဆိုတာသိတယ်။ ဒါပေမယ့် Clone ဖုန်းတွေအတွက်တော့မရှိဘူး၊ မင်းက ptro ကိုဝယ်ဖို့ထုတ်လုပ်သူက OBSOLENCE PROGRAMMED လို့ငါထင်တယ်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သတိထားပါ၊ တစ်စုံတစ်ယောက်က၎င်းကိုမည်သို့ပြန်လည်ရှင်သန်စေနိုင်မည့်အကြောင်းတစ်ခုခုသိလျှင်၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်
jose sanchez အားပြန်ပြောပါ
Valeth Lievano ဟုသူကပြောသည်
"ဆဲလ်မှာဗိုင်းရပ်စ်ရှိတယ်၊ ဘက်ထရီကမကောင်းဘူး" ဒါမှမဟုတ်အဲဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုကိုပြောတဲ့မျက်နှာပြင်တခုကို install လုပ်လိုက်တယ်၊ အဲဒါကိုငါသော့ဖွင့်လိုက်တိုင်း၊ အကြောင်းရင်းကိုရှာပြီးအလှည့်များစွာပေးပြီးနောက်လျှောက်လွှာများတွင်ကျွန်တော် app တစ်ခုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သူ့မှာနာမည်မရှိဘူး၊ သူ့ကိုဖြုတ်ပစ်ခွင့်မပြုခဲ့ဘူး၊ ငါ avast နဲ့ပြားချပ်ချပ်နဲ့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ avast ကို install လုပ်ပြီးနောက်မှာ၊ ငါက wallpapers နဲ့ start ကိုထိန်းချုပ်တဲ့လုံခြုံရေး application တစ်ခုဆီကို avast ထည့်ပြီးတဲ့အခါ၊ အက်ပလီကေးရှင်းသည်ဆဲလ်ကိုထိန်းချုပ်ခွင့်နှင့်အံ့အားသင့်စေနိုင်သောခွင့်ပြုချက်ဖြစ်သည်။ နာမည်မရှိသော၊ ကျွန်ုပ်ကိုဘာမှမလုပ်နိုင်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည် avast သို့ပြန်သွားပြီး Rebicir သို့ပြန်ရောက်သည်။ ငါ 00000 ကူးစက်ခံရသည်။ ဤအသိပေးချက်ကိုကျွန်ုပ်သော့ဖွင့်သည့်အခါတိုင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ငြီးငွေ့စွာကျွန်ုပ်အား avasta ကမ်းလှမ်းသော application ကိုထည့်သွင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ APUS ဟုခေါ်သည်၊ ၎င်းသည်အကြိမ်များစွာပြန်လည်စတင်ခဲ့သည်၊ သို့သော် "မသိသောရင်းမြစ်များမှအပလီကေးရှင်းများတပ်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုခြင်း" ကိုကျွန်ုပ်မရပ်တန့်မှီတိုင်အောင်ဤသတိပေးချက်ကိုကျွန်ုပ်ဆက်လက်ထားရှိခဲ့သည်။ APUS ကိုစတင် configure လုပ်ပြီး၎င်းကိုစတင်ခွင့်ပြုသည် မိုဘိုင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်ခွင့်ပြုထားသောအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်သူအံ့အားသင့်စေသည့်အချက်များ၊ မည်သူစတင်ဖွင့်သောအခါငါမဖယ်ရှားနိုင်သည့်အက်ပ်ကိုကျွန်ုပ်ဖယ်ထုတ်နိုင်သည်။ ထိုမှကျွန်ုပ်သည်ထည့်သွင်းထားသောအပလီကေးရှင်းများသို့ သွား၍ အက်ပလီကေးရှင်းကိုဖယ်ရှားပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ပြန်လည်စတင်သည်။ ငါပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ဆိုးဝါးတဲ့သတိပေးချက်ကိုရေးတဲ့အခါ၊ ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပေမဲ့၊ ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးအတွေ့အကြုံကကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာတွေကိုယုတ္တိနည်းအရမဟုတ်ဘဲ၊ ဝဘ်ဆိုဒ်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်နှင့် 10+ ။
Valeth Lievano အားပြန်ပြောပါ
ငါစက်ရုံကိုပြန်လည်စတင်ပြီးပါပြီ၊ အန္တရာယ်ရှိသည့်အသုံးချပရိုဂရမ်များကိုဖျက်သိမ်းပြီး၊ ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဗိုင်းရပ်စ် ၄ ကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ ကျွန်ုပ်ထပ်တူပြproblemနာရှိနေသေးသည်။ အပလီကေးရှင်းများနှင့်ကြော်ငြာများသည်နောက်တစ်ခုကိုဆက်ပြီးဒေါင်းလုပ်ချပြီးကျွန်ုပ်၏လက်ကိုင်ဖုန်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်အလိုအလျောက်ပြည့်နှက်နေသည်။ ဗိုင်းရပ်စ်သည် operating system အပြင်အဆင်တွင်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ စက်ရုံပြန်လည်တည်ဆောက်ပုံကိုရှင်းပြရန်အခြားရှင်းပြချက်ကိုကျွန်ုပ်မရှာနိုင်ပါကထပ်တူပြproblemနာကိုဆက်လုပ်ပါ။
ထို့အပြင်အလုပ်ဆဲလ်ဖုန်းဖြစ်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်သည် whatsaap ထက်မပိုပါ။
မိုဘိုင်းသည် Sky အမှတ်တံဆိပ်ဆဲလ်ဖုန်းဖြစ်သည်။ တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုကူညီပေးနိုင်မလား? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဒါကြောင့်ငါ "engriks" ဗိုင်းရပ်စ်တွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တယ်။ ဖြေရှင်းချက် ၂ ခုကတော့ခက်တယ်။ အင်တာနက်ကိုမဆက်သွယ်ပါနဲ့၊ ဗိုင်းရပ်စ်တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အသုံးချပရိုဂရမ်တွေတပ်ဆင်နိုင်တဲ့ Mobilego ပရိုဂရမ် (ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာထဲမှာ) ကိုသုံးပါ။ အောက်ဖော်ပြပါလုံခြုံမှု ၃၆၀ သည်ကူးစက်ခံရသည့်အက်ပလီကေးရှင်းများ (ကျွန်ုပ်အားပြသခြင်းသတိပေးချက် ၁ ခု၊ ဒေတာ ၂ ခုဖျက်သိမ်းခြင်း၊ အင်အားရပ်တန့်ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးအပလီကေးရှင်းကိုပိတ်ခြင်း) ကျွန်ုပ်စက်ကိုစစ်ဆေးပြီးစက်ကိရိယာကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်နောက်လာမည့် Mobilego ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ PC မှ applications များကို KingRoot ဖြင့် install လုပ်ပါ http://king.myapp.com/myapp/kdown/img/NewKingrootV4.85_C139_B255_en_release_2016_03_29_105203.apk တစ်ချိန်ကအမြစ်တွယ်ခဲ့ပြီ Link2SD ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။ ကျွန်ုပ်အတွက်အင်ဂျရစ်၊ Adobe လေနှင့်ထုိုင်သည့်အေးခဲနေသောအသုံးချပရိုဂရမ်များကိုဖျက်ပစ်ပါ
Marilin ကို C ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် Blu Studio 5.0II ရှိပြီးကျွန်ုပ်သည် Firewall Service tab ကိုအမြဲတမ်းရယူပြီး၎င်းအားကျွန်ုပ်အားဖုန်းထဲသို့ထည့်သည်။ အလွန်နှေးနှေးကွေးနေပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကို application များစွာဖွင့်ရန်ခွင့်မပြုပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုမသိပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်စက်ရုံကိုပြန်လည်စတင်ပြီးသည်နှင့်ထပ်တူဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Marilin C ကိုစာပြန်ပါ
Mary Almendarez Campos ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် air inco ဖုန်းရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်စာမျက်နှာရှိအဆင့်အားလုံးကိုလုပ်ဆောင်ပြီးပြီဖြစ်သော်လည်းဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်ကြော်ငြာများပါသော application များသည် ဆက်လက်၍ ဒေါင်းလုပ်ချနေပါသည်။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲ
Mary Almendarez Campos ကိုပြန်ပြောပါ
သငျသညျစနစ်၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကို update လုပ်ခဲ့သလား
ငါ android အမြောက်အများကိုပြင်ခဲ့ပေမယ့်ဒီဟာက woo pad-724lj ဖြစ်ပြီး WeQR application ကိုရပ်လိုက်ပြီ။
တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်၏ android တက်ဘလက်သည်ကပ်နေပြီးကျွန်ုပ်သည်ဗိုင်းရပ်စ်များကိုရှာဖွေသည်။ ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုရှာမတွေ့ပါ။ သင်ဘာအကြံပြုသနည်း။ သင်၏အာရုံစိုက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Estiven ipia သို့ပြန်သွားပါ
သင်၏စနစ်ကိုစနစ်တကျအဆင့်မြှင့်တင်ရန်အကြံပြုပါသည်။ သင့်မှာ Android မွမ်းမံမှုများရှိမရှိကြည့်ပါ။ မင်္ဂလာပါ။
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ moto x play တွင်ဗိုင်းရပ်စ်နှင့်ပတ်သက်သောပြaနာတစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်ပြုခဲ့သည်မှာ VirusTotal ကိုထည့်သွင်းခြင်း၊ ဤ application အား အသုံးပြု၍ ဗိုင်းရပ်စ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ခြင်းနှင့်မည်သည့်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည့်နည်းတူပြသခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။ HiddenAds Trojan တစ်ခု၊ ငါ McAfee ကိုကျွန်တော်တပ်ဆင်လိုက်ပြီးချက်ချင်းတွေ့ရှိပြီးဖယ်ထုတ်လိုက်တယ်။ ဒါကမင်းကိုကူညီမယ်၊ မင်းရဲ့မှတ်ချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။
ကျွန်ုပ်၏မက်ဆေ့ခ်ျများ၊ ကျွန်ုပ်၏ wasap ကိုမြင်ရန်နောက်ခံတွင်ဖွင့်လှစ်သော com.android.user.manager စနစ်ရှိအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုအားသိမ်းဆည်းထားပြီးဖြစ်သောကျွန်ုပ်တွင်ဗိုင်းရပ်စ်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏ SD သည်ဖိုင်တွဲများကိုဖန်တီးသည်၊ ဖျက်ပစ်ပါ။ ငါ pc ကိုဖျက်လိုက်ပြီးအဆုံးမှာထပ်မံဖန်တီးသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ခွင့်ပြုချက်မရပဲအခြားပရိုဂရမ်များကိုတပ်ဆင်သည်၊ ၎င်းကိုပိတ်ထားပြီးနောက်၌ပင် wifi နှင့်ဒေတာနှင့်ဆက်သွယ်သည်။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး
ကျွန်ုပ်၏တယ်လီဖုန်းအားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီကျွန်ုပ်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုတစ်စုံတစ် ဦး နှင့်အဆက်အသွယ်လုပ်သောကြောင့်မကြာခဏကျွန်ုပ်၏ဖုန်းကိုသာဖွင့်နိုင်သည်။
သင့်ဖုန်းတွင်စနစ်အသစ်တစ်ခုရှိမရှိကြည့်ပါ။ Yolanda ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။
မင်္ဂလာနံနက်ခင်း၊ ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်၏ android ဖုန်းသို့ဗိုင်းရပ်စ်မည်သို့ကူးစက်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ ၎င်းသည်ရောက်ရှိလာပြီးကျွန်ုပ်အတွက်ဘာမှအချိန်မရှိခဲ့ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်စတင်ဖွင့်လှစ်။ ယခုစဖွင့်သည်တွင်2စက္ကန့်အထိမကြာပါ။ တစ်ယောက်တည်း
ကောင်းသောညမှာကျွန်ုပ်မှာ Samsung Galaxy Grand Prime ပါ။ ဒေတာကိုဖွင့်တိုင်း (သို့) ၀ ိုင်ဖိုင်နဲ့ချိတ်ဆက်တိုင်း applications တွေစတင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်၊ တပ်ဆင်တယ်၊ ကြော်ငြာတွေနဲ့ညစ်ညမ်းစာပေစာမျက်နှာတွေပေါ်လာတယ်။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး၊ ဆဲလ်ဖုန်း ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကိုငါဘယ်လိုဖယ်ရှားနိုင်လဲ။
ဆဲလ်ဖုန်း Samsung Galaxy GALAXI5သည်ဗိုင်းရပ်စ်ရှိနေသည်ဟုဆိုသော Antibirus ကိုလက်ခံရန်လည်းဆိုထားသည်။ Antivirus ကိုလက်ခံသည့်ဆဲလ်ဖုန်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်အမှန်တကယ်ရှိကြောင်းကျွန်ုပ်သည် Antivirus ကိုလက်ခံနိုင်သည်။
Luis fernando ကိုပြန်ကြားပါ
Javier Felipe Vilca Figueroa ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ လူကောင်း၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီခေါင်းစဉ်ကဗိုင်းရပ်စ်ကိုဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးတောင်မှမတွေ့သေးဘူး၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခုငါ ၀ မ်းသာနေတယ်။
Javier Felipe Vilca Figueroa အားပြန်ပြောပါ
maria Celeste ဟုသူကပြောသည်
စိတ်မကောင်းပေမယ့်ကျွန်တော်ကတစ်ခုခုမေးနေတုန်းပဲ၊ သူတို့ကမင်းကိုမေးစရာမေးခွန်းပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါဖိုင်တစ်ခုတပ်ဆင်တော့မယ်၊ ငါ့ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးကသူ့ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးနေတယ်၊ ​​အဲဒီမှာ Trojan ဗိုင်းရပ်စ်ရှိတယ်၊ ထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဟာဘာမှမရှိဘူး၊ ကျွန်တော့်တက်ဘလက်မှာသူတို့မှာရှိသင့်တဲ့အားနည်းချက်တွေမရှိခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါကတော့သံသယရှိနေသေးတယ်၊ ငါ့ကိုမင်းပေးမယ်လို့ငါထင်ခဲ့တယ် ကျေးဇူးပြုပြီးဒီအကြံဥာဏ်ပေးပါ
maria celeste အားပြန်ကြားပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဖုန်းသည် windows ကိုသာဖွင့်သည်။ ကီးဘုတ်ကသာ၎င်းကို Lenovo s820 ကိုကူညီပါလိမ့်မည်။ ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဗ်ဝဲကိုကျွန်ုပ် download လုပ်ပြီးပြီ
ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိတဲ့သူကိုဆဲလ်ဖုန်းနေရာကိုယူပြီးသူတို့ကိုသူတို့ကို flash လုပ်ခိုင်းမလားမေးကြည့်ရမယ်။ ငါကနေရာတစ်ခုကိုယူသွားတာပေါ့။ သူတို့ကိုငါနဲ့လတ်ဆတ်စွာနဲ့စတင်ခဲ့တယ်။ ဒါက Hard restet ထက်ပိုကောင်းတယ်။ "ဒါပေမယ့်ဒေါ်လာ ၂၀ လောက်ရနိုင်တဲ့ဥရုဂွေးပီဆိုဒေါ်လာ ၆၀၀ ကုန်ကျတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ Tablet210.1 နှင့်ပြaနာရှိသည်။ ဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကရက်ပေါင်းများစွာသူ့ဟာသူပြန်ဖွင့်လာပြီးဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူး၊ လုံခြုံစိတ်ချတဲ့စနစ်လည်းအလုပ်လုပ်လို့မရဘူး။
Io လာပါ ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မှာ Orinoquia auyantepuy y221 -u03 ဆိုတဲ့ဗင်နီဇွဲလားဆဲလ်ဖုန်းမှာအတွေ့အကြုံရှိတယ်၊ ငါ PLAY STORE ကနေ application တစ်ခုကို install လုပ်တယ်၊ အဲဒါကိုသန့်ရှင်းသောပြန်လည်အသုံးပြုလို့လဲထင်တယ်၊ အဲဒါမျိုးကိုငါဖွင့်လိုက်ရင်ဗိုင်းရပ်စ်တွေလိုမျိုးပေါ့။ neiphal နှင့် Key Chain၊ အင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်သောအခါဆဲလ်ဖုန်းအလွန်နှေးစေသည့်အပြင်ပူပြင်းသည့်ဗီဒီယိုများကဲ့သို့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုများစတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
Virus ကို Disable - အလုပ်မလုပ်ဘူး၊ သူတို့ကကူးစက်ခံထားရတဲ့ link တွေကိုဆက်ပြီး download လုပ်တယ်။
စက်ရုံပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း - ဗိုင်းရပ်စ်များကိုပြန်လည်အသက်သွင်းသည်။
Root: ဗိုင်းရပ်စ်တွေက root မှာရှိနေတုန်းပဲ။
မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်: နူးညံ့သိမ်မွေ့သောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သော်လည်းတစ်ခုတည်းသောဖြစ်နိုင်သည့်ဖြေရှင်းနည်းသည်၎င်းကိုလုပ်ရန်ဗဟုသုတအနည်းငယ်သာလိုအပ်ပြီး၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ သို့သော်သင်ကအထူးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့်ပြုလုပ်ပါကသင့်အားအားသွင်းလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်အာမခံရှိပါက၎င်းကိုသင်ဆဲလ်ဖုန်းဝယ်ယူပြီး၎င်းအတွက်သင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးမည့်အဆောက်အအုံသို့ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်သည်။
Manuel မင်းရဲ့အကူအညီလိုတယ် !!!!! ငါ့မှာ alcatel one touch idol mini s2 ရှိတယ်။ ငါက sim card ပျောက်နေတယ်၊ ​​ငါသုံးနေတဲ့ apps တွေထဲကတစ်ခုထွက်လာတယ်။ သူကသူ့ဟာသူ restart ပြန်လုပ်လိုက်တယ်။ အခြားသူများအကြား SuperbCleaner, SuperLocker, Apus, DuBatterySaver, DuBatterySpeed, Finger ကိုနှိပ်ပါ။ ????? ငါကစက်ရုံကနေပြန်ထားပြီးပြီ။ တန်ဖိုးတွေကိုပြန်လည်ထည့်လိုက်ပြီ။ ငါ chip, SD ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တယ်။ အတူတူပဲ။ AAAAAUXILIOOOOO X PLEASE !!!!! သငျသညျအကြှနျုပျကိုsurelyကန်အမှန်ပေးပါလိမ့်မယ်သောအကူအညီများအတွက်ကြိုတင်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
KEKA ။ ဟုသူကပြောသည်
အားလုံးမင်္ဂလာပါ!! သူတို့ကိုငါပြောတာ !? ဆဲလ်ဖုန်းနှင့် MALWARE ဖြင့်ဖုန်းများရှိသောသူငယ်ချင်းများကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အားကူညီရန်လာသည်သို့မဟုတ်၎င်းတို့အားသူတို့၏ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ပတ်သက်သောအယူအဆ MALWARE မှစီမံခန့်ခွဲသည်။ ထိုနည်းတူစွာပင် MALWAR THE « MALWARE »ရှိသည်။ ငါပေးခဲ့တာအကောင်းဆုံးအယူအဆဖြစ်လို့ PARNCLUB ကိုရပ်တန့်ဖို့ (သို့) ဖျက်ပစ်ဖို့အသုံးမပြုဘူးဆိုရင်၊ အကယ်လို့သင်ဟာအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်အကြောင်းမှာ၊ အကယ်၍ သင်သည်ထိုပြPROနာကိုကြုံဖူးပါကဆဲလ်ဖုန်းအသစ်တစ်ခုကိုဝယ်ယူပြီးပျက်စီးသွားသူကိုပစ်ချပါ။
adriannis garcia ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါကောင်းသောည။ ကျွန်ုပ်တွင်အပြောင်းအလဲ 4-0 ရရှိထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အရှိန်မြင့်တက်လာပြီးရုတ်တရက်တရုတ်စင်ကြယ်သောမိန်းမများထွက်လာသည်။ ပညာရှင်တစ် ဦး ကသူသည် malware ရှိကြောင်း၊ သို့သော်မည်သို့ဖြစ်မည်ကိုမသိကြောင်းပြောခဲ့သည် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအဲဒီလိုလုပ်ပြီးအတူတူပါပဲပြန်လာခဲ့လို့ငါ့ကိုကူညီပေးပါ
adriannis garcia သို့စာပြန်ပါ
THANKSAAAAAAAAAS 😀😀provided😀 provided provided 😀provided😀😀😀 provided provided 😀 provided 😀 provided 😀 provided provided provided provided 😀😀 provided provided provided provided provided provided provided provided provided provided provided provided provided provided provided provided provided provided provided provided provided provided provided provided provided provided provided provided provided provided provided provided provided provided provided provided provided provided provided provided provided provided 😀 provided provided provided provided 😀 provided provided 😀😀😀😀 provided 😀😀😀😀😀 between between between between between between between between between between I between between between between between between between between between between between between between between between between between between between between XNUMX က Admin ကိုပြန်သွားလိုက်ရင်ပြန်ပေါ်လာရင်သူပြန်ချိန်ညှိချက်များကိုပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုငါပေးနိုင်မယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။ ထပ်မံဟုတ်ကဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကိုဖျက်ပစ်ပါ။ ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်သည်က၎င်းသည်အသစ်ပြောင်းနေသည်ဟုပြောပြီးကျွန်ုပ်ဖျက်ပစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ DDD
ဟိုဆေး Del Rosario placeholder ပုံရိပ် ဟုသူကပြောသည်
Vladimir - ကျွန်တော့်ဇယားမှာပြသနာရှိခဲ့တယ်၊ ငါလုပ်ခဲ့တာက USB mode ထဲကိုရောက်သွားတယ်၊ အဲဒီနောက် Avast ဗိုင်းရပ်စ်ကိုငါဖြတ်လိုက်တယ်၊ ပြီးတော့ antivirus ကပေးတဲ့လိပ်စာနဲ့ငါ folder တွေ configure လုပ်မယ်၊ ငါရှာနေတာက ငါကအမြစ်တွယ်ခဲ့ကြပေမယ့်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၏နာမ
Jose Del Rosario သို့ပြန်သွားပါ
angel keppis (ချစ်စရာရုပ်ပုံများ) ဟုသူကပြောသည်
သင်ခန်းစာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ နောက်ဆုံးတော့ကျွန်ုပ်၏ android ဖုန်းရှိသည့်ဗိုင်းရပ်စ်အချို့ကိုဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့သည်။
angel keppis ကိုပြန်သွားသည် (ပုံများ)
ငါ့ကိစ္စ (S3 neo) မှာ Iphon6ကိုငါရမယ်၊ ဖုန်းကို update လုပ်ရမယ်၊ ဗိုင်းရပ်စ်ရှိတယ်၊ တစ်ခုခုတပ်ဆင်ရမယ်လို့စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ကြော်ငြာတစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်တယ်။
ငါလုံခြုံစိတ်ချရသောစနစ်ဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ အစတွင်သံသယဖြစ်ဖွယ် application ကိုမတွေ့ရပါ။ သို့သော် device အတွက် administrator app တစ်ခုရှိမရှိစစ်ဆေးပြီးအမည်မပါရှိပါက၎င်းကိုပိတ်ထားလိုက်ပြီး application manager တွင်မရှိသော application ရှိကြောင်းသတိပြုမိသည်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်း (အမည်၊ ဓါတ်ပုံမဟုတ်ပါ) ၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့်အနက်ရောင်လိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အာကာသ၏ ၈ megabytes နေရာယူထားပြီး၊ ၎င်းကိုထိလိုက်ပြီး၎င်းသည်အခွင့်ထူးများစွာရှိသောအပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ညှိပြီးနေပါ၊ သင့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုသိပြီးသူတို့တပ်ဆင်ထားသည့်အရာအားလုံးကို (ဖြစ်နိုင်လျှင်) သိပါ။
သင်၏ android မှဗိုင်းရပ်စ်များကိုမည်သို့အမှန်တကယ်ဖျက်ရကြောင်းသင်သိလိုပါကဤဗီဒီယိုသည်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မည် https://www.youtube.com/watch?v=qo2aTjOZsvQ&t=13s
သင်၏ android မှ malware များကိုဖယ်ရှားရန်နည်းလမ်းအားလုံးနှင့်အတူဤသင်ခန်းစာကိုဤတွင်တွေ့နိုင်သည် https://www.youtube.com/watch?v=qo2aTjOZsvQ&t=13s
ChinoGraund QPin QPun QPan ဟုသူကပြောသည်
ဒီနေရာမှာသင့်ရဲ့ android ထဲက virus နဲ့ malware တွေကိုဖယ်ရှားဖို့နည်းလမ်းများစွာနဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုထားလိုက်ပါ။ သင်က၎င်းကိုနည်းလမ်းများနဲ့မဖျက်နိုင်လျှင်သင်၏ဆဲလ်ကိုစက်ရုံမှပြန်လာရင်လျှို့ဝှက်ကုဒ်ကိုထားပေးပြီးကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါတယ်။ သင့်ကိုကူညီသည်။ https://www.youtube.com/watch?v=qo2aTjOZsvQ&t=13s
ChinoGraund QPin QPun QPan အားပြန်ပြောပါ
ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် malware.Fotaprovider နှင့် datagosoel ၂ ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်
Cristian Bravo ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ သူတို့အခြေအနေမကောင်းဘူးဆိုတာကိုကျွန်မနားလည်ပါတယ်။ အံ့ဖွယ်နည်းနဲ့ SD ကဒ်ကိုထုတ်ယူခဲ့ပြီးပြproblemနာပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ ကျွန်ုပ်လွန်ခဲ့သော ၃ လကဖုန်းတစ်လုံး ၀ ယ်ခဲ့တယ်လို့မြင်ယောင်ကြည့်ပါ၊ ၎င်းကို၎င်းကိုတစ်နှစ်ခွဲလောက်ပေးဆပ်ရပါမယ်၊ ငါမဖယ်ရှားနိုင်ကြောင်းကိုဖတ်ပြီးကတည်းကကျွန်ုပ်အလွန်ကြောက်ရွံ့ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်၏ SD ထဲတွင်ရှိနေသောအံ့ဖွယ်နည်းဖြင့်ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်ပါ၊ ၎င်းကိုဖယ်ရှား။ ၎င်းမှဖုန်းမှလက်ခံထားသည့်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်စေပြန်ပါသည်။ အဲဒါကကျွန်တော့်ကိုစက္ကန့်တိုင်းကြော်ငြာကြောင်းပြတယ်၊ ဒါကြောင့်တကယ်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတာပေါ့
Cristian Bravo အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်အချို့တွင်တွေ့ရသည့်ပြaနာတစ်ခုရှိခဲ့သည်၊ Hi Security ဟုခေါ်သောအက်ပလီကေးရှင်းသည်ဤပြproblemနာကိုဖြေရှင်းခဲ့သည်။ ၎င်းကို Playstore မှ Download လုပ်ပြီးသင်၏ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ သိပ်နောက်ကျသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့မျှော်လင့်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်မှာ j7 prime ရှိပြီးဗိုင်းရပ်စ်ရှိတယ်ထင်ပါတယ်။ ပြproblemနာက back နှင့်မကြာသေးမီကခလုတ်များအလုပ်လုပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ တစ်ခါတစ်ရံ wi-fi အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။ antivirus ကိုပြန်လည်ကူးယူခြင်း၊ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဘာမှမရှိဘူး၊ ကောင်းစွာဒါပေမယ့်ထို့နောက်သူကနောက်တဖန်ပျက်ကွက်။
ဒီကနေ့ 4shared မှ web video caster apk ကို install လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ အဆုံးမှာ windows တွေအများကြီးရတယ်။ avg antivirus ကို install လုပ်ဖို့ window တစ်ခုရတယ်။ အဲဒါကိုမပိတ်နိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် web video caster ကိုမပြီးသေးဘူး။ install လုပ်ဖို့နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော့်အမှားကြီးကြီးမားမားရှိတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ avg antivirus logo ပါတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တစ်ခု install လုပ်ပြီး system မှာ install လုပ်ထားခဲ့တဲ့ avg antivirus program ကို uninstall လုပ်တိုင်းအချိန်တိုင်း၎င်းကိုဖယ်ရှားရန်မဖြစ်နိုင်သည့်သော့ခတ်မျက်နှာပြင်တစ်ခုရှုပ်ထွေးသွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထပ်တူဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးတပ်ဆင်ရန်ကြိုးစားသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တပ်ဆင်လိုသောဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးကိုပြသသည့် ၀ င်းဒိုးတစ်ခုရောက်လာသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အား avg antivirus ကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းခြင်းများကိုခွင့်မပြုပါ။ ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်ကိုစိတ်ဝင်စားသူများအတွက်ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ပြုခြင်းများပြုလုပ်ပြီးနောက်၎င်းကိုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည် marioemprendedor555@gmail.com.
Javier ဟိုဆေး Lucena ဟုသူကပြောသည်
ZEROA ဟုခေါ်သောအဆိုးဆုံး malware တစ်ခုမှာဤကွပ်မျက်ခံရပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကွပ်မျက်လိုက်သောဤ malware သည် root ကိုရရှိသည် (ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်စက်ကိုအမြစ်တွယ်ပြီးစူပါအသုံးပြုသူအခွင့်အရေးများကိုလွှဲပြောင်းယူသည်) ၎င်းသည်လုံခြုံရေး option ကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ရင်းမြစ်များနှင့်ကွန်ယက်များကိုထိန်းချုပ်ပါ။ စကားလုံးတစ်လုံးတည်းဖြင့်သာအရင်းအမြစ်ညွှန်ကြားမှုကိုပြန်လည်ရယူပါ။ ထုတ်လုပ်သူသည်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုနှင့်ဆော့ (ဖ်) ဝဲအားထောက်ပံ့ပေးမှုရှိ၊ မရှိကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လူတိုင်းကစီမံခန့်ခွဲမည် android ရှိလူသစ်အတွက်ယခုတိုးတက်မှုသည်အများအားဖြင့်ဤ booby ထောင်ချောက်များထဲသို့မကျရောက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်
javier jose lucena အားပြန်ကြားပါ
မင်္ဂလာပါ။ FotaProvider လို့ခေါ်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးကိုတစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုကူညီနိုင်အောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်တွင်ပြforနာရှိနေသည်မှာကျွန်ုပ်အတွက်မည်သည့်အရာကိုတပ်ဆင်ထားသည်ကို၎င်း၊ ၎င်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်သို့မဟုတ်မည်သည့်အရာဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်လုံခြုံစိတ်ချရသောစနစ်ဖြင့်အလုပ်လုပ်နေဆဲဖြစ်ပြီးအသုံးချပရိုဂရမ်များစာရင်းတွင်ထူးဆန်းသည့်အရာမရှိပါ။ သူဖွင့်လိုက်တဲ့ App အားလုံးကိုပိတ်လိုက်တယ်။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး၊ ငါ့စက်က bq Aquaris M5 ပါ။ ဘယ်သူ့ကိုမှငါတကယ်တန်ဖိုးထားမယ်ဆိုတာသိရင်
ဟယ်လို။ အရာအားလုံးကိုခွင့်ပြုထားတဲ့ "com, google.provision" လို့ခေါ်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ရှိတယ်။ ငါဖုန်းကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာ reboot လုပ်ပေမယ့်မဖျက်ပါဘူး။ ငါအမြစ်မကြိုးစားခဲ့ကြ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းတွင် auper အကြီးအကျယ် virua ရှိပြီး၎င်းကို chromes tine ဟုခေါ်သည်၊ chrome logo ပင်ကိုယ်တိုင်ပင်၊ ကျွန်ုပ်၏ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုမကြာခဏရှာဖွေတွေ့ရှိသည်၊ ၎င်းကိုဖြုတ်တပ်ပြီးကိုယ်တိုင်ပြန်လည်တပ်ဆင်သည်။ ပြန်ပေါ်လာ, ငါလုပ်ဖို့မသိရပါဘူး
Reynaldo romulo ramos huamaliano ဟုသူကပြောသည်
ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ avast antivirus ကို install လုပ်တဲ့အခါမှာ၊ 'launcher3токтоလိုက်ပြီ' ဆိုတဲ့ message ပေါ်လာပြီးဒီပြသနာကဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ၊ ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာကြောင့်စက်ရုံ settings ကိုပြန်ထားဖို့မကူညီဘူး။
Reynaldo romulo ramos huamaliano အားပြန်ပြောပါ
Reynaldo သည် link2sd ကိုသင်၏ဆဲလ်ဖုန်းကို root လုပ်နည်းနှင့်သင်ဖျက်ပစ်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ခန်းစာရှာဖွေသည်။
ကျွန်တော့်မှာဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိတယ်။ တစ်နေ့မှာအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုကိုဒေါင်းလုပ်ချချင်တယ်။ မှားယွင်းမှုအားဖြင့်တော့အဲ့ဒီမဟုတ်တဲ့အက်ပလီကေးရှင်းကိုကျွန်တော်တပ်ဆင်ခဲ့တယ်။ ဆဲလ်ဖုန်းတွင်ရုတ်တရက်နောက်ခံတစ်ခုမှအင်တာနက်ကိုပိတ်ပင်ထားသောကြောင့် browser ကိုဖွင့်လိုက်သည်။ ဖုန်းကိုအမြစ်တွယ်နေသောကြောင့်ငါဖျက်ပစ်တော့သည်။ သို့သော် super SU သည်ကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုရန် super SU ထဲသို့ဝင်သောအခါ root root ကိုခွင့်မပြုတော့တော့ကြောင်းသတိပြုမိသည်။ ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိလာတယ်။ စူပါ SU ကရပ်လိုက်ပြီ။ ဒါကငါ့ကိုအက်ပလီကေးရှင်းထဲဝင်ခွင့်မပြုဘူးဗျ။ ဗိုင်းရပ်စ်ကိုငါရပ်လိုက်ပြီ။ ငါအင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာအသုံးမကျတဲ့အက်ပလီကေးရှင်းတွေကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ဖို့ပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်။ ၎င်းသည် Crazy နှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်ဘက်ထရီကုန်သွားသည်။ ဆဲလ်ဖုန်းသည်ပြန်လည်စတင်လာလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်၎င်းကိုဖွင့်သောအခါ၎င်းသည် application များကိုအဆင့်မြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဗိုင်းရပ်စ်အားပိတ်ဆို့ခြင်းပြုလုပ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ပြန်လည်စတင်ရန်ခဲယဉ်းသည်။ နည်းပညာရှင်တစ် ဦး က၎င်းကိုပြသခဲ့သည်နှင့်ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းခဲ့သည်ရှိရာဆဲလ်ဖုန်းကိုယူပါ။
ကျွန်ုပ်တွင် com.android.system.v5 ဗိုင်းရပ်စ်ရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်မဖျက်နိုင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်မည်သို့လုပ်နိုင်သနည်း။
LINK2SD ဖြင့်ဗိုင်းရပ်စ်ကိုဖယ်ရှားပါ။ သင်၏ဆဲလ်ဖုန်းတွင်ထိုကိရိယာကိုအသုံးပြုရန်နှင့် SUPER SU ကိုတပ်ဆင်ရန် root user ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ မင်္ဂလာပါ
ငါစုံစမ်းလိုသည်။ ငါ့သားသည်ကစားကွင်းစတိုးမှမဟုတ်သည့် S8 ပေါ်တွင်လျှောက်လွှာတစ်ခုအောက်တွင်ဖုန်းသည်ပိတ်ထားသည့်၊ ဖွင့်ခြင်းမရှိသဖြင့်၊ အားသွင်းသည့်အလင်းကိုအားသွင်းခြင်းသို့မဟုတ်မှတ်သားခြင်းမပြုလုပ်သည့် maleware ထဲသို့ဝင်ရောက်သည်။ ဘာမှမ ဖုန်းကိုပြန်ရရန်နည်းလမ်းရှိပါသလား။ သင့်မှတ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်စောင့်နေပါတယ် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဖုန်းကိုဖွင့်ပြီးသော့ဖွင့်ချိန် မှစ၍ ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းနှင့်အကူအညီလိုအပ်ပါသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အနက်ရောင်မျက်နှာပြင်ရရှိပြီးပိတ်သွားသည်
ဆောင်းပါးထဲမှာအယူအဆမှားနေတယ်။ သငျသညျဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအတွက်တီကောင်မှားယွင်းနေသည်။ ဗိုင်းရပ်စ်ကိုအသုံးပြုသူမှပူးတွဲဖိုင်တစ်ခု၊ ကူးယူခြင်း၊ အချိတ်အဆက်အတိုအစရှိသည်ဖြင့်ကွပ်ကဲရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်၊ worm သည်သူ့ဟာသူပုံတူပွားပြီး I Love You, Sasser, Blaster စသည်ဖြင့်စနစ်များကိုအလိုအလျောက်ကူးစက်စေသည့်သို့မဟုတ်သမိုင်းတွင်လူသိများသောပထမဆုံး worm ဖြစ်သော Morris တီကောင်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးတွင်ကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ်များသည်ကွန်ပျူတာမှကွန်ပျူတာသို့ပျံ့နှံ့သွားသော်လည်းဗိုင်းရပ်စ်နှင့်မတူဘဲ၎င်းသည်လူတစ် ဦး ၏အကူအညီမပါဘဲပျံ့နှံ့နိုင်သည်။
ZOJI Z7 သည်အလွန်ခံနိုင်ရည်ရှိသော terminal ဖြစ်ပြီး ၇၅ ယူရိုဖြစ်သည်
Android အတွက်ပေါ့ပါးမြန်ဆန်ပြီးအလုပ်လုပ်သော web browser